စိမျ့ – My Blog
“လနျးတယျနျော အကိုကွီး…..” ကြျောမြိုးဟနျစကားကွောငျ့ သိနျးဇျော လှမျးကွညျ့မိသညျ။ နုနုငယျငယျ ကောငျမလေးတဈယောကျ အသကျက ၂၀ ကြျောပုံ မရ။အသားလေးတှကေ ရှရေောငျဝငျးနသေညျ။ဝတျထားသောထဘီစကပျက သူမ၏ကိုယျအားတငျးကွပျစှာ စညျးနှောငျထားသဖွငျ့ ဖှံ့ထှားသော တငျသား အစုံက အလုံးလိုကျကားအယျပျေါလှငျနသေညျ။အောကျပိုငျးနှငျ့ ညီမြှသော ခန်ဒာကိုယျအပျေါပိုငျးကလညျးဖှံ့ထှားမှုမှာ အောကျပိုငျးနှငျ့ညီမြှရုံမြှမက လညျ ဟိုကျအကငြ်္ီကွောငျ့ အိ၍တငျးနသေောအသားဝငျးဝငျးလေးမြားကို ရိုးတိုးရိတျတိတျလှမျးမွငျလိုကျရသေးသညျ။ တမငျဖွောငျ့ထားပုံရသော အခြောငျး လိုကျကနြသေညျ့ ဆံပငျလေးတှကေကြောဖကျလကျပွငျတဝိုကျတှငျ ဝဲနသေညျ။ ပျေါလှငျသော နှာတံလေး၏ထိပျက ခပျခြှနျခြှနျလေးနှငျ့ နှုတျခမျးလုံးလုံး လေးမြားက မကျြဆံကွီးကွီးဖွငျ့ ကော့ညှတျထူထဲသော မကျြတောငျကွီးမြား ဝနျးရံကာစှဲမကျစရာ ကောငျးလှသညျ။ ကောငျမလေးက သူတို့ထိုငျနရောဖကျ သို့ တခကျြလှညျ့၍ မကျြလုံးလေးဝှကေ့ာပွုံးယောငျလေး တခကျြသနျးပေးသှားသညျ။ သူတို့ထိုငျနတောက ၉၂ လမျးထိပျ ဆဲဗငျးအလဲဗငျး ၇၁၁ လကျဘကျ ရညျဆိုငျလမျးမဘကျ အစှနျဆုံး စားပှဲတှငျဖွဈသညျ။ “အကိုကွီး နဲ့ သိလား…”“…အငျး……သိတယျ…”“….ပွောပွပါအုံး…..အကိုကွီးရ….သူ့ အကွောငျး တှေ ကနြျော စိတျဝငျစားလို့ပါ”“မငျးတို့ လူငယျတှေ တျောတျောခကျတာဘဲ လှတာလေးမွငျရငျ သဘောကကြွတာဘဲ” အသကျက ၄၀ နီးပါးသာရှိ သျောလညျး သူ့အသကျထကျ အမြားကွီးရငျ့သောအဖိုးကွီးလသေံနှငျ့ သိနျးဇျောက ပွောလိုကျသညျ။ “ဟာ…..အကိုကွီး…ကလဲ ဒါကတော့ဗြာ…..”သိနျး ဇျောက ကောငျမလေးသှားရာလမျးဖကျကို ကြျောပွီးကွညျ့လိုကျသညျ
။ကောငျမလေးကိုတော့ မတှရေ့တော့။ကွိတျကွိတျတိုး သှားလာနသေောလူတှကွေားမှာ ပြောကျကှယျသှားပွီဖွဈသညျ။ “…ပွောပါအုံး…..အကိုကွီး ရ….”ကြျောဟနျမြိုး ဖငျနရောပွငျထိုငျရငျး မြှျောလငျ့တကွီးမေးသညျ။“…ဘာကိုလဲ….”“စောစောက ကောငျမလေး အကွောငျးကိုပေါ့…..”သိနျးဇျော ပွောမ ပွခငျြကွောငျး အကဲခတျမိပမေဲ့လညျး သိခငျြစိတျကပွငျးထနျနလေတေော့ အားမနာနိုငျ။ကြျောဟနျမြိုး အတငျးမေးမိသညျ။ သိနျးဇျော စိတျပကျြသော မကျြနှာပေးဖွငျ့ ခေါငျးကိုခါယမျးရငျး ဗူးထဲမှ စီးကရကျတဈလိပျကို ထုတျ၍နှုတျခမျးတှငျတကေ့ာ မီးညှိလိုကျသညျ။ “ဈေးကိုငျလိုကျတာ….ဒါကွောငျ့ လူပြိုကွီးဖွဈနတော…”ကြျောဟနျမြိုး စိတျမရှညျနိုငျသညျ့အဆုံး သူ့ကို အပွဈဆိုသညျ။“ဟ ကောငျရ…..ငါမယူခငျြလို့ပါကှ….မငျးဘာသိလဲ…..လူပြိုကွီး ဖွဈရတာအကွောငျးနှဈခကျြရှိတယျကှ….သိပျပွီး ထုံအလှနျးရငျလညျး လူပြိုကွီးဖွဈတတျတယျ။နောကျတဈခကျြက သိပျပွီးလညျရငျလညျး လူပြိုကွီးဖွဈ တတျတယျကှ….” စကားအဆုံးတော့ သိနျးဇျောက ကြျောဟနျမြိုး မကျြနှာကို တဈခကျြ အကဲခတျလိုကျသညျ။စောစောကလို တကျကွှရှငျလနျးတာမြိုးမရှိ တော့ဘဲ အလိုမကသြောမကျြနှာပေးနှငျ့ သုနျမှုနျ၍နသေညျ။
“ ကဲ……ပါ……..မငျးသိပျပွီးသိခငျြနရေငျ ငါပွောပွပါ့မယျ….သူ့နာမညျက စိမျ့ တဲ့…နတောက ၈၉ လမျးထဲမှာ….ငါသိတာက အဲလောကျဘဲ….”“အငျး…..ဒီ လောကျသိရလဲ…..မဆိုးပါဘူး…”“သူ့နာမညျက အဲဒီ…စိမျ့…..ဆိုတာ တလုံးထဲဘဲလား….”“မဟုတျဘူး…….နာမညျအပွညျ့အစုံက စိမျ့စိမျ့သ…..”ူ“၈၉ လမျးထဲမှာဆိုတော့ မမအိ သူ့ကိုသိရငျသိမှာ ကနျြတာတှေ မမအိကိုဘဲဆကျမေးတော့မယျ…”“ဟကေ့ောငျ……မငျး ….အိအိ…ကိုမေးရငျမေး ဒါပမေဲ့ ငါပွော တာ မပွညျ့စုံလို့ဆိုတာမြိုးတော့ ထညျ့မပွောနဲ့”“ဘာကိုပွောတာလဲ….ကြှနျတျော သဘောမပေါကျဘူး…. “မငျးမေးခငျြမေး……ငါ့နာမညျ…..မပါစနေဲ့လို့ ပွောတာကှ…ရှငျးလား…”“ဟဲ…ဟဲ…” ကြျောဟနျမြိုး ဘာအဓိပ်ပါယျပေါကျသှားသညျမသိ။သူ့ကို တခကျြကွညျ့ကာပွုံးယောငျသနျးသှားပွီး တဟဲဟဲ ရီ သညျ။“ကဲ…သှားမယျကှာ……အလုပျရှိသေးတယျ….”ပွောပွီး ငှရှေငျးကာ နှဈယောကျစလုံး လမျးခှဲ၍ပွနျခဲ့ကွသညျ။ကြျောဟနျမြိုးက လမျး ၉၀ ထဲတှငျ နသေညျ။သိနျးဇျောက ၉၂ လမျးထဲတှငျ နသေညျ။သူတို့နှဈယောကျ လကျဘကျရညျဆိုငျတှငျ မကွာခဏဆုံတတျပွီး တဈရပျကှကျထဲနသေူမြားဖွဈသညျ့ အလြောကျ ရငျးနှီးနခေဲ့တာ ကွာပွီဖွဈသညျ။ကြျောဟနျမြိုးအသကျက အခုမှ ၂၀ ကြျောရုံသာရှိသေးသညျ။သိနျးဇျောအနနှေငျ့ ကွညျ့လြှငျတော့မနူးမနပျ လေးပေါ့။ဒါမြိုးလေးတှကေ ပွောရဆိုရခကျတာ သိပွီးသား….ဒါပမေဲ့သိနျးဇျောက ဒါမြိုးတှေ ရိုးနပွေီဟု တှေးရငျး ပွုံးလိုကျမိသညျ။
ဒီနေ့ ရုံးပိတျရကျလညျးဖွဈ အိနှငျ့မတှရေ့တာလဲ ကွာပွီဖွဈ၍ လကျဘကျရညျဆိုငျသို့ ပငျ မဝငျတော့ဘဲ သိနျးဇျော ၈၉ လမျးဘကျထှကျလာမိသညျ။ ထိုငျနကြေ ၇၁၁ဆိုငျရှရေ့ောကျတော့ လှညျ့ကွညျ့မိသညျ။ကြျောဟနျမြိုးကို မတှရေ့။ဒီကောငျ လေးပြောကျနတော သုံးလေးရကျရှိပွီ။ ၈၉ လမျးရောကျတော့ အိနတောက ဒုတိယထပျတှငျ။လှခေါးကို တကျမညျအလုပျလှခေါးဘေး မွညေီထပျအခနျးက ဖှငျ့ထားလတေော့ သူလှညျ့ကွညျ့မိသညျ။“ဦး…….မမအိဆီသှား မလို့လား….” တံခါးဝသို့ထှကျ၍ပွောလိုကျသော စိမျ့စိမျ့သူအား သိနျးဇျောအားမနာ တမျးကွညျ့မိသညျ။“အေး…..ဟုတျတယျ…..”ကောငျမလေး ပွုံးလိုကျ သညျ။ညာဖကျပါးတဈဖကျထဲတှငျ ရှိသော ပါးခြိုငျ့လေးကခဈြစရာကောငျးလှသညျ။ “မမအိ…..စောစောကတငျထှကျသှားတယျ…သူတို့ဘဏျမှာ အလုပျမြားနလေို့ ဒီနအေို့ဗာတိုငျဆငျးရမယျလို့ပွောတယျ…….လာဝငျ….ထိုငျအုံး လေ….ဦး…”သိနျးဇျော ဖိနပျခြှတျကာ တိုကျခနျးထဲ ဝငျလိုကျသညျ။“ခဏ ထိုငျအုံးနျော…..ဦး….”ကောငျမလေး နောကျဖေးဘကျပွေးဝငျသှားသညျ။အိမျနေ ရငျး ဝတျထားသောထဘီလေးအောကျတှငျ တငျးရငျးစှငျ့ကားနသေော တငျပါးနှဈဆုံက သိနျးဇျောကိုညှိ့ငငျသှားသညျ။ သိနျးဇျောကုလားထိုငျတဈလုံးတှငျ ဝငျထိုငျလိုကျသညျ။ဗိုကျထဲကနဲနဲဆာလာသညျ။ ခါတိုငျးအိဆီရောကျ လြှငျ အိက အသုတျထှကျဝယျပွီး နှဈယောကျသားအတူစားနကွေ။ဒီနတေ့ော့ အိက အိုဗာတိုငျဆငျးရသညျ။ပွနျမှဘဲ လကျဘကျရညျဆိုငျဝငျတော့မညျဟု တှေးလိုကျမိသညျ။
သိနျးဇျော ကောငျမလေးဝငျသှားရာ အိမျနောကျဖကျသို့ တခကျြငဲ့ကွညျ့မိ၏။ကောငျမလေးကို မတှရေ့ပေ။ဒီလိုဘဲ သိနျးဇျော အိ ထံလာခိုကျ စိမျ့စိမျ့သူတို့ အခနျးသို့မကွာခဏဝငျ၍ လညျမိတတျသညျ။ရငျးနှီးနခေဲ့တာကွာပွီ ဖွဈသညျ။“ဦး…..ဒီမှာ ကျောဖီ သောကျအုံး….” စိမျ့စိမျ့သူအနားရောကျလာပွီး ကျောဖီ ပနျးကနျနှငျ့ လှီးထားသော ကိတျမုနျ့မြားထညျ့ထားသညျ့ ပနျးကနျတဈခပျြကို ခပြေးသညျ။ ကောငျမလေးက သူ့ရှမှေ့ ကုလားထိုငျတှငျဝငျ၍ ထိုငျသညျ။အိမျ နရေငျးဝတျထားသော ခရမျးရောငျပွောငျ ထဘီလေးနှငျ့ဖွူဖှေးသော အသားရောငျလေးကိုနောကျခံပွုကာ စိမျ့စိမျ့သူလှခငျြတိုငျး လှနသေညျ။ သိနျးဇျောတ ခကျြပွုံးလိုကျပွီး ကျောဖီကို တငုံငုံ၍ ကိတျမုနျ့တခပျြကိုလှမျးယူလိုကျသညျ။ “ဦး……ကိုမေးမလို့….”“မေးလေ……”“ဦး…နဲ့ လကျဘကျရညျဆိုငျမှာ တှေ့ တှနေ့ရေတဲ့ တယောကျက ဘယျကလဲဟငျ…”သိနျးဇျော မကျြခုံးတဈခကျြ မွငျ့တကျသှားပွီး“လမျး ၉၀ ထဲမှာ နတေယျ……သူ့နာမညျက ကြျောဟနျမြိုးတဲ့… အလုပျလကျမဲ့ ၁၀တနျးကပြေါ့….”စကားဆုံးတော့ ကျောဖီတငုံထပျ၍ သောကျလိုကျသညျ။“ဘာဖွဈလို့လဲ……စိမျ့….”“ဟို….ဘာမှ မဟုတျပါဘူး…..ကွုံလို့ မေးကွညျ့တာပါ….”“စိမျ့ တဈယောကျထဲလား…..အမကွီးရော…..”“အနျတီက ၁၂၄ လမျးဘကျသှားတယျ….”စိမျ့စိမျ့သူတို့ တူဝရီးနှဈယောကျထဲနသေညျကို သိပွီးသား။ “ကဲ…..စားလို့သောကျလို့လဲ ပွီးပွီ……ကြေးဇူးဘဲနျော…..ပွနျလိုကျအုံးမယျ…ညီမ”“ဟုတျကဲ့ပါ…..”သူထှကျလာတော့ ကောငျမလေး တံခါး ထပိတျသညျ။အပွနျလမျးတဈလြှောကျအိ၏အလှနှငျ့ စိမျ့၏အလှကို နှိုငျးယှဉျပွီး တှေးမိနသေညျ။အိ၏အလှကရငျ့ကကျြတညျငွိမျသောအလှ။ရငျထဲအေး သညျ။ စိမျ့၏အလှက ရငျထဲ ဘလောငျဆူပွီးလာရလောကျအောငျ ပူသောအလှ စိမျ့နှငျ့တှပွေီ့းတိုငျး သူ့အာရုံထဲမှာ အိကအလိုအလြောကျ ပြောကျကှယျ သှားတတျနကွေပွီဖွဈသညျ။ ဒီရကျထဲမှာ အလုပျတှကေနြေ၍ သိနျးဇျောမအားရ။မဂဇငျးမကျြနှာဖုံးလုံးခငျြး မကျြနှာဖုံး ပနျးခြီတှကေ အတျောလေးကနြေ သညျ။
အိမျပွနျရောကျပွီးအလုပျလုပျနသေျောလညျး စိတျကမပါခငျြ။စိမျ့စိမျ့သူက ကြျောဟနျမြိုးအကွောငျးကိုမေးလိုကျသညျ့ ကိစ်စက သူ့အာရုံကို နှောကျယှကျ နသေညျမဟုတျပါလား။ “ဒေါကျ……ဒေါကျ…….ဒေါကျ…..”တံခါးခေါကျသံကွောငျ့ သိနျးဇျောမထခငျြထခငျြဖွငျ့ တံခါးထဖှငျ့ပေးလိုကျသညျ။ “…..ဟငျ…..စိမျ့…..ပါလား….ဘာကိစ်စရှိလို့လဲ…”“…..ဟုတျတယျ……ဦး….”“…….လာ……အထဲဝငျထိုငျလေ…….”သိနျးဇျော တိုကျခနျးတံခါးပွနျပိတျခိုကျ စိမျ့စိမျ့သူ အခနျးထဲကို ကွညျ့မိသညျ။စားပှဲပျေါတှငျ ရှိုငျရယျဝီစကီပုလငျးက ထောငျလြှကျသား။ဘေးတှငျဖနျခှကျတဈခှကျနှငျ့ အသားကငျပနျးကနျတဈခပျြ ကို တှလေို့ကျရသညျ။ စိမျ့စိမျ့သူနှုတျခမျးတှနျ့လိုကျသညျ။“……ထိုငျလေ…..စိမျ့…..”“……ဟုတျကဲ့ပါ…..”နှဈယောကျစလုံးပွိုငျတူထိုငျမိသညျ။ဖနျခှကျထဲမှ လကျနှဈလုံးလောကျကနျြသောဝီစကီကိုကောကျမော့လိုကျပွီး အသားကငျတဈဖကျကို ကောကျဝါးလိုကျသညျ။စိမျ့စိမျ့သူက သူ့ကို မကျြနှာလေးတညျတညျ ဖွငျ့ ကွညျ့နသေညျ။“….ကဲ…မလာစဖူး……အလာထူး…….ဆိုစမျးပါအုံး…”“…….အျော…..ဟုတျကဲ့……..ဦးကို မေးစရာလေးရှိလို့….”စိမျ့စိမျ့သူ၏ လသေံက အရငျကနဲ့မတူဘဲ မာဆတျဆတျဖွဈနသေညျကို ခေါငျးထဲမှာရီဝနေသေညျ့ကွားက သိနျးဇျော သတိထားလိုကျမိသညျ။ “……မေးပါဗြာ….”“…….ဦးက ကမြကို ဘာဖွဈလို့ ပူစီလေးလို့….ပွောရတာလဲ…….”“……ဟငျ…”စိမျ့စိမျ့သူ တဲ့ကွီးပွောလိုကျတာက သိနျးဇျော၏ရငျထဲကို ဒိနျးကနဲ လာမှနျသညျ။သူအံ သွသော အမူအယာနှငျ့ မကျြလုံးကွီးပွူးပွီး စိမျ့စိမျ့သူကို ကွညျ့နမေိသညျ။“…..ဦး……ကြျောဟနျမြိုးကို ပွီးခဲ့တဲ့ ၂ ရကျလောကျ ပွောလိုကျတာလေ….ဒီ ကောငျမလေးက ပူစီလေးပါကှာဆိုတာလေ…ငွငျးခငျြသေးလို့လား….”သိနျးဇျော ပူလာသော လညျခြောငျးတှကေို စားပှဲပျေါရှိ မတျခှကျထဲမှရတေကြိုကျ သောကျ၍ ဂလု ဆိုပွီး အတငျးမော့ခလြိုကျသညျ “…….ဟုတျတယျ…….ကို ပွောမိတယျ….”“…..ကမြတို့နဲ့ ဦး….သိတာခငျတာကွာပွီဘဲ….ဘာဖွဈလို့ အဲလို ပွောရတာလဲကမြကောငျးကောငျးမှနျမှနျဆိုတာ……ဦး လဲသိသားနဲ့….”သိနျးဇျော အရကျကို လကျနှဈလုံးလောကျ ဖနျခှကျထဲငှဲ့လိုကျပွီးရလေကျနှဈလုံး လောကျ ထပျရောကာ တဘရိတျထဲမော့ခလြိုကျသညျ။ ပွီးတော့အသားကငျတဖတျကို ကောကျဝါးပွီး စိမျ့စိမျ့သူကို ရီဝစှော ကွညျ့လိုကျသညျ။
“ …..ပွောပါအုံး…..ဘာဖွဈလို့ အဲလို ပွောရတာလဲ…”“ကို……..မဖွခေငျြဘူး…….”“…..မပွောလို့မရဘူး…..ကမြသိပျသိခငျြတယျ…..ရှငျ့စကားက ကမြကို အရမျးနဈနာသှားတာ…….ကဲ…ပွောပါအုံး….”“….ကဲ……မငျးသိခငျြနလေဲ ပွောရတာပေါ…….”ဒီမြှနှငျ့စကားရပျသှားပွီး သိနျးဇျောက ခါးဆနျ့၍ ပွငျထိုငျ လိုကျသညျ။“……ပွောလေ……ကမြနားထောငျနတေယျ….”နီရဲ၍ ခကျထနျနသေော သူမ၏မကျြနှာဆီမှ အကွညျ့ကို ခှာလိုကျသညျ။“…….ခဈြမိလို့ပေါ့…… စိမျ့ရယျ…”တိုးတိုးလေး တဈလုံးခငျြးပွောလိုကျသော သိနျးဇျော၏အသံက စိမျ့စိမျ့သူနားထဲမှာဟိနျးထှကျ၍ ပူဆငျးသှားသညျ။“…….ဘာ…… ဘယျလို……..ဦး….”“…….မငျးကို…..ကိုယျ….” “….တျောပွီ…ဆကျမပွောနဲ့ ဖအနေဲ့….သမီးလောကျရှိတဲ့ ဟာကိုမြား….”“…ဟား…..ဟား…ဟား….”သိနျး ဇျော ခှကျထိုးခှကျလနျ ရီလိုကျတော့ ကောငျမလေး ကွောငျသှားသညျ။ဒီလူကွီး ရခြေိနျကိုကျနပွေီလား…..။ရခြေိနျကိုကျရုံမြှမက ကြျောနပွေီ…..။ဝိုငျးသိမျး တောမညျ့ဆဲဆဲ သူမရောကျလာပွီး သူ့ပွဈခကျြကို ထိုးဆှလိုကျသညျ့အတှကျသိနျးဇျော ထပျဆငျ့၍ သောကျလိုကျမိသညျ။ သူ့ကို ကွောငျကွညျ့နသေော မကျြလုံးကို မကျြလှာခလြိုကျပွီးဆို့နဈကွကှေဲသောပုံစံဖွငျ့ နဖူးပျေါဝဲကနြသေော ဆံပငျလေးမြားကိုသပျတငျလိုကျသညျ။“……ရှငျ…….မရှကျဘူး လား….”“……ဘာကိုလဲ……စိမျ့…”“…..ရှငျ့…..အရှယျကွီးနဲ့…..”“……ဟား…ဟား….ဟား…”သိနျးဇျော ဒုတိယအကွိမျမွောကျ ရီလိုကျပွနျသညျ။အရကျနံ့က လှငျ့ပြံ၍နသေညျ။
“……..မငျး…….ကိုယျ့ကို…..မုနျးသှားပွီလား…..စိမျ့…”ရှသေို့ တိုး၍ မကျြနှာခငျြးထိလုမတတျ ပွောလိုကျသောစကား။စိမျ့စိမျ့သူ ဘာစကားမှ ပွနျမပွော ဖွဈ။အသားလေးတှေ တုနျနသေညျ။ ဘာမပွော ညာမပွောနှငျ့ သိနျးဇျောက သူမ၏ပုခုံးသားတငျးတငျးကဈြကဈြလေးကိုဆှဲယူကာ ရငျခှငျထဲ ဆှဲသှငျးလိုကျ သညျ။“……..ဟငျ…….အို…..”“……ရှငျ……ရှငျ……..ဒါ…ဒါ…..ဘာလုပျတာလဲ……”စိမျ့စိမျ့သူ ဖွတျလတျစှာ သိနျးဇျော၏ လကျမြားကို ရိုကထုတျလိုကျ သညျ။ျလကျလှတျသှားပမေဲ့ သိနျးဇျောမကျြနှာက ဖွတျကနဲ ရှသေို့တိုးပွီး နမျးလိုကျသညျ။ခကျြခွငျး မကျြနှာလှဲလိုကျသဖွငျ့ ပါးကို မနမျးမိသျောလညျး န ထငျစပျကိုနမျးလိုကျမိသညျ။ မကျြနှာလေးတဈဝိုကျ သှေးမြား ရှိနျးကနဲ ခံစားလိုကျရသညျ။ “……ရှငျ……လူယုတျမာ…..”ခကျြခွငျးဒေါသသှေးတို့က ဆူဝေ လာသညျ။ပွောလဲပွော နောကျသို့လညျးတလှမျးဆုတျလိုကျသော စိမျ့စိမျ့သူအား သိနျးဇျောအားဖွငျ့ လကျတဖကျကို လှမျး၍ဆှဲလိုကျသညျ။ သူ့ဖကျသို့ ငိုကျ၍ပါလာသော စိမျ့စိမျ့သူက စားပှဲပျေါရှိရှိုငျရယျဝီစကီပုလငျးကို လှမျး၍ဆှဲလိုကျပွီး တပါတညျး သိနျးဇျော၏ခေါငျးကိုရိုကျခလြိုကျသညျ။ သိနျးဇျော ခေါငျးကိုဖတျြကနဲ ငုံ့ပေးလိုကျပွီး အားလှနျသှားသော စိမျ့စိမျ့သူ၏လကျမှ တတောငျဆဈကို သူ့လကျဖနောငျ့နှငျ့ တှနျးပေးလိုကျသညျ။ အားနှငျ့ရိုကျသော ရိုကျခကျြက အားလှနျကာ အရှိနျနှငျ့ယိုငျသှားစဉျ ထပျမအတှနျးခံလိုကျရသောကွောငျ့ သိနျးဇျော၏ရငျခှငျထဲသို့ ကြောလေးမှီပွီး လဲကသြှားသညျ။ “…….ခှ မျး…..ခြ……လှမျး…..”လကျထဲမှ အရကျပုလငျးက စားပှဲစှနျးနှငျ့တိုကျမိသှားပွီး ကှဲအသှား စိမျ့စိမျ့သူက လကျမှလှတျခလြိုကျသညျ။
“…..လှတျ….လှတျ….လှတျစမျ့းပါ…..ခှေးကွီး…..”“ဟငျ…….နငျ……နငျ…..ငါ့ကို…..” သိနျးဇျော၏လှိုငျးထနသေော ရာဂစိတျထဲသို့ ဒေါသစိတျက ရောပွှနျး သှားသညျ။ သူ့ရငျခှငျထဲသို့ ကြောမှီကလြာသော စိမျ့စိမျ့သူ၏လညျဂုတျလေးကို ရှသေို့ ဖိ၍တှနျးကာ စားပှဲပျေါသို့ မှောကျခလြိုကျသညျ။“……ဒုနျး…… အမလေး….”နဖူးနှငျ့စားပှဲ မိတျဆကျသှားသဖွငျ့ ခေါငျးထဲ မိုကျကနဲဖွဈသှားပွီး မှိတျလိုကျရသောမကျြလုံးနှဈလုံးကို ခကျြခွငျးပွနျ၍ဖှငျ့လိုကျသညျ။ “…တိ ရိစ်ဆာနျကွီး…..မယုတျမာနဲ့…လှတျ….ဖယျ…ဖယျ….စမျး…”“….ဟား…ဟား…ဟား….လှတျမယျ…လှတျမယျ….စိတျခြ….ငါ့ရဲ့သှေးသားတှကေို မငျးရဲ့ကိုယျထဲ ကို လှတျပေးမယျ…..စိတျသာခြ…”“…….ရှငျ…..ရှငျ……နျော…”စိမျ့စိမျ့သူနှုတျမှ ဤမြှသာ ထှကျလာနိုငျပွီး မေးကွောလေးမြား ထောငျအောငျအံကွိတျ လိုကျကာ မကျြရညျတှေ တပေါကျပေါကျ ကလြာသညျ။ အရကျရခြေိနျလှနျနသေော သိနျးဇျော ရာဂစိတျနှငျ့ဒေါသစိတျတို့ စှတျဖကျလာသောအခါ စိတျထဲမှ အတားအဆီးမရှိတော့။လူရောစိတျပါ လှတျနသေညျ။ သိနျးဇျောက စိမျ့စိမျ့သူ ခါးကို ဒူနှငျ့ဖိထောကျထားရငျး စားပှဲပျေါတှငျမှောကျရကျဖွဈနသေော စိမျ့စိမျ့ သူ၏ ဂြိုငျးအောကျမှ လကျကိုလြှိုနှိုကျကာလုံးကဈြအိစကျနသေော နို့လေးနှဈဖကျကို ဆုပျညှဈလိုကျလသေညျ။“….အ….အ….ခှေးကွီး….မ….မလုပျ နဲ့…..”ကွောကျအားလနျ့အားကွားက တကိုယျလုံးကွကျသီးတဖနျြးဖနျြးထသှားသညျ။ကိုယျလုံးလေး တှနျ့ကနဲ လူးသှားသညျ။ စိမျ့စိမျ့သူ အားယူကာ ကုနျး ထရနျ ဒူးကိုအကှေးကွမျးပွငျတှငျ လေးဘကျထောကျရကျသားဖွဈသှားသညျ။
သိနျးဇျောက စိမျ့စိမျ့သူ၏နသယျစပျလေးကို မမှီမကမျးငုံ့နမျးလိုကျရာ စိမျ့စိမျ့ သူက ခေါငျးကိုကွမျးတမျးစှာ ခါထုတျပဈလိုကျသညျ။ မကျြနှာလေးကို နမျး၍ မမှီသောအခါ နုညကျဝငျးမှတျသောဂုတျသားတဈတဈလေးကို လှမျးကိုကျ၍ မလှတျတမျး ခဲထားလိုကျသညျ။ “….ဟငျ…..အငျး….အငျး….ဟငျး….ဟငျး…”စိမျ့စိမျ့သူ အနာခံပွီး ရုနျးသညျ။သိနျးဇျောကလညျး မလှတျသညျ့အပွငျသူ့ လကျနှဈဖကျက လုံးတဈအိစကျသော နို့လေးနှဈလုံးကို ပယျပယျနယျနယျကွီးကိုငျညှဈဆုပျနယျပေးလိုကျရာ စိမျ့စိမျ့သူ တကိုယျလုံး ထိုးထိုးထှနျ့ထှနျ့ ဖွဈ သှားသညျ။ သညျအခြိနျနှငျ့ တပွိုငျနကျတညျးတှငျ မာကြောသော အခြောငျးကွီးကစိမျ့စိမျ့သူ၏ ဖငျကွားသို့ ပုဆိုးနှငျ့ထဘီခံနသေညျ့ကွားက တှနျး၍ဝငျလာ သညျ။“……………လှတျ…….ခှေးကွီး…..”စူးရှအကျကှဲသော စိမျ့စိမျ့သူ၏အျောသံက တိုကျခနျးတဈခုလုံး လှမျးခွုံသှားသညျ။အျောလညျးအျော ဖငျကိုလညျး ရမျးလိုကျသောကွောငျ့ ဖငျကွားမှ အသားနုလေးမြား၏ အတှကေို့ ထိတှနေ့သေော လီးက ဘေးသို့ ခြျောထှကျသှားသညျ။ သိနျးဇျော ဒေါသအိုးပေါကျက သှားသညျ။ှဲ“…..ဒုနျး….အငျ့……အငျး….”ရကျစကျလှနျးသညျဟု ပွောရမညျပငျ။စိမျ့စိမျ့သူ၏ နောကျစကေို့ လကျနှငျ့အုပျပွီးမကျြနှာကို စားပှဲနှငျ့ကိုငျဆောငျ့ လိုကျသောကွောငျ့ စိမျ့စိမျ့သူ မမြေ့ောလုနီးပါးခံစားလိုကျရသညျ။နားထဲမှ လတှေထှေကျသှားကာ မကျြခုံးစှနျးမှ သှေးပူပူမြားစီးကလြာသညျကို ခံစားသိ လိုကျရသသညျ။ သိနျးဇျော အခြိနျဆှဲနလြှေငျ အန်တရာယျမြားမညျကို တှေးလိုကျမိလို့လား။ဒါမှမဟုတျ သှေးသားတှကေ တားမရအောငျ ဆူပှကျလာလို့လား မသိ။
သူ့ပုဆိုးကိုဆတျကနဲ ခြှတျခလြိုကျသလို စိမျ့စိမျ့သူ၏ထဘီကိုလဲ ဆောငျ့၍ ဆှဲခြှတျခလြိုကျသညျ။ ဝငျးဝါအိစကျသော စိမျ့စိမျ့သူဖငျကွီးက သိနျး ဇျော၏ကာမရမ်ပကျဇျော ကိုဟုနျးကနဲတောကျလောငျစပွေီး ပွငျးပွသော ဒေါသတို့ ရောထှေးပေါငျးစပျကာကွမျးတမျးသနျမာလှနျးနသေညျ။ ခေါငျးတဈခုလုံး အုံခဲပွီး မကျြရညျစကျလကျနှငျ့ မှုံမှိုငျးခံစားနရေသညျ့ကွားမှပငျ အဝတျမဲ့သော ဖငျကွားတငျးတငျးကွီးနှဈခွမျးကွားသို့ နှေးပူသော လီးတနျကွီး အထိအတှကေို့ ခံစားနရေကွောငျး အသိစိတျက သိနသေညျ။ စားပှဲပျေါ ဆနျ့တငျထားသော လကျနှဈဖကျကှေးထောကျခှငျ့မရလောကျအောငျ သိနျးဇျောမှ ယောကျြားအားကွီးဖွငျ့ ဖိထားသညျ။ သိနျးဇျော၏ လီးတနျကွီးက ထှားကွိုငျးတုတျခိုငျစှာ သနျမာလကျြသံခြောငျးကွီးတခြောငျးပမာ ဖငျကွားသို့ တစှပျစှပျ တိုးဝငျနသေညျ။ တမငျညှောငျ့နသေောကွောငျ့ ပွဈကနဲ ပွဈကနဲ အသံလေးမြားဖွငျ့ ဖငျသား နှဈခွမျးကွားသို့ လီးထိပျကွီး တိုးဝငျသှားတိုငျး မွညျနသေညျ။ စိမျ့စိမျ့သူ သတိရသျောလညျး မကျြလုံးကဖွငျ့ မဖှငျ့နိုငျ။တကိုယျလုံးလညျး လှုပျမရဘဲအားအငျမြားနှုံးခညျြ့နဲ့သှားသလို ခံစားနရေသညျ။နောကျဆုံးရှိသော အငျအားမြားကိုစုစညျး၍ ဖငျကွီးကို အထကျသို့ကော့တငျပွီး ကော့ထိုးလိုကျကာ သိနျးဇျော၏ကိုယျကွီးကို ခါထုတျပဈရနျ ကွိုးစားလိုကျသညျ။
“…..ကဲ…..ဟာ…..အငျး…..”“…..ဟာ…..ငွိမျငွိမျနေ….စမျး….ကဲ…ဟာ….”“……ဒုနျး….အ….အား….ကြှတ…ကြှတ….ကြှတ….”ျသိနျးဇျော လူစိတျ ပြောကျနပွေီ။ဒုတိယအကွိမျ စိမျ့စိမျ့သူ နောကျစိအား ညာလကျဝါးဖွငျ့အုပျကိုငျကာ မကျြနှာကို စားပှဲဖွငျ့ ဖိဆောငျ့ပဈလိုကျပွနျသညျ။ စိမျ့စိမျ့သူ နှာခေါငျး ထဲ မှနျထူသှားသညျ။အရာရာသညျ ခတ်ေတမြှ အမှောငျဖုံးသှားတော့သညျ။ ဘယျလောကျကွာသှားသညျမသိ။ စိမျ့စိမျ့သူ သတိရလာတော့မှယေ့ာပျေါရောကျ နသေညျ။သူမ၏ခွနှေဈခြောငျး မိုးပျေါသို့ထောငျနသေညျ။ခွဖေဝါးတို့က ခေါငျရငျးဖကျသို့ လနျနသေညျ။တကိုယျလုံးတှငျ ဘာအဝတျအစားမှ မရှိတော့ပေ။ လကျတဝါးစာမြှ ဖေါငျးတငျးမောကျကွှနသေော ဆီးခုံကွီးအထကျမှ နီကငျြကငျြစောကျမှေးလေးမြားကိုပငျ စိမျ့စိမျ့သူ ပွနျမွငျနရေသညျ။ စိမျ့စိမျ့ သူ၏လကျ နှဈဖကျက ဘေးသို့ အတောငျပံပမာ ပြံ့ကြ၍နသေညျ။ခေါငျးမှဆံနှယျတို့က မကျြနှာတဈခွမျးကို အုပျ၍နသေညျ။စောကျပတျထဲမှ ပူကနဲ ခံစား ခကျြနှငျ့အတူ ကိုယျလုံးလေးက ဆတျကနဲဖွဈကာ ခါးက ကုနျးကနဲ ထလိုကျသညျ။ဗွကနဲ……ဗွဈကနဲ…ကွပျကွပျတောကျတောကျတိုးတိုးဝငျလာသော လီး သံကိုလညျး ကွားလိုကျရသညျ။ လေးလံသော မကျြခှံအစုံကို အသာဟ၍ မှေးစငျးပွီး ကွညျ့လိုကျမိသညျ။သိနျးဇျောက လကျနှဈဖကျကို သူမ၏ကိုယျဘေး တဈဖကျတဈခကျြဆီသို့ ခှပွီးထောကျထားသညျ။စိမျ့စိမျ့သူ၏ဒကောကျခှကျနှဈဖကျကို သူ့ပုခုံးပျေါတှငျထမျးထားသညျ။ သိနျးဇျော၏လီးတနျ တုတျတုတျခဲခဲ ကွီးက စိမျ့စိမျ့သူ၏ ပွဈခြှဲနသေောစောကျပတျထဲသို့ စိုကျစိုကျနဈဝငျသှားသညျကို ငုံွ့ကျညျ့ရငျး သိနျးဇျောက လိုးနသေညျ။ စိမျ့စိမျ့သူ သတိလဈသှားသညျ ကို အခှငျ့ကောငျးယူကာ အဝတျအစားတှအေားလုံးကို ခြှတျပဈခဲ့သညျ။ဖေါငျးကားမို့မောငျနသေော စောကျပတျလေးဝငျးဝငျးပပနှငျ့ ကွေးနီရောငျစောကျ မှေးလေးမြား ခွံရံလြှကျ လှပစှာ နီရဲရှမျးစိုခုံးထနသေညျ။ သူက ကွမျးတမျးစှာ မဆောငျ့။
ခပျဖွေးဖွေးလေးဖိခလြိုကျ မြှငျးမြှငျးလေးဆှဲနှုတျလိုကျ လုပျရငျး လီးအဝငျအထှကျကို အသအေခြာငုံ့ကွညျ့ရငျးလိုးနခွေငျးဖွဈသညျ။စိမျ့စိမျ့သူက သတိလဈဟနျဆောငျရငျး လှတျမွောကျရနျနညျးလမျးကို တှေးတောကွံဆ နမေိသညျ။ဒါပမေဲ့…….ဒါပမေဲ့ပေါ့…….စောကျပတျနဲ့လီး ထိပွီတှပွေီ့ဆိုသညျနှငျ့ အသှေးအသားတို့က တားမရဆီးမရနိုငျဖွဈကာ မညျသို့မှ ထိနျးခြုပျ၍ မရ တော့ပေ။ တဇှတျဇှတျ ဖွေးဖွေးခငျြး နဈနဈသှငျးခလြိုကျသော လီးဒဈကွီး က စောကျစငေ့ေါကျတောကျလေးကို တိုကျတိုကျဝငျသှားတိုငျး စိမျ့ တကိုယျလုံး ရှိနျးဖိနျးကငျြတကျသှားသညျ။ ထိုအခိုကျ စအိုလေးကို ရှုံ့ကနဲ လုပျလိုကျမိ တာကအစ သူမကိုယျသူမ သိနသေညျ။“….ဗွဈ….ဇှတျ…..ဇှိ…စှပျ…..ဗွ ဈ…..ဘှတျ….”စိမျ့ ဖငျကွီးက မသိမသာ ဘယျညာယိမျးနှဲ့ကာ ခါယမျးလာ တတျသညျ။ဖငျကွီးက အပျေါဖကျသို့လညျး ဇတျကနဲ ဇတျကနဲ တှနျ့တှနျ့တကျသှား တတျသညျ။ ထိုသို့ တကျသှားတိုငျး သိနျးဇျောက ငုံ့ကွညျ့ရငျး သူ့လီးကွီး ကို တညျ့မတျစှာ စိုကျခဝြိုကခပြွဈလိုကျသညျ။“…..ဘှတျ……ပလှတျ…..ဗွဈ…..ဗွ ဈ……”“…..အငျး…..အငျး….အငျ့….ဟငျး….ဟငျး….ဟငျး…”စောကျပတျ နှုတျခမျးသားထူထူနှဈခွမျးက ခပျအာအာလေးပွဲပွဲသှားအောငျပငျလီးတနျကွီးက အရှိနျနှငျ့အဆကျမပွတျ စိုကျစိုကျဝငျသှားနသေညျ။သိနျးဇျော ပါးစပျမှ ဖားဖိုကွီးလို အသကျရှုသံတှေ မွနျလာပွီး အားရပါးရကိုဆောငျ့လိုးနပေသေညျ။ ဆောငျ့လိုးလိုကျတိုငျး လီးတနျကွီးနှငျ့ စောကျပတျနှဈခမျးသားလေးမြားက လိပျလိပျပွီး ကပျပါလာတတျသညျ။ ဒါကိုပငျ သိနျးဇျောသဘောအကကြွီး ကြ ကာ ဆကျတိုကျမနားတမျး ဆောငျ့လိုးနသေညျ။ စအိုဖကျမှ အရပွေား လေးမြားက လီးတနျကွီးစိုကျစိုကျဝငျသှားတိုငျး ရှုံ့ရှုံသှားပွီးတငျးကနဲ တငျးကနဲ ဖွဈဖွဈသှားသညျ။ ဖွူခြှဲပွဈခဲသော စောကျရညျမြားက စောကျပတျ နှုတျခမျးပတျလညျတှငျပွူတဈပွူတဈနှငျ့ဖွဈကာ အမွုပျလေးမြားထနသေညျ။ လီးတနျကွီး၏ အရသာက ထူးခွားလှနျကဲစှာ ကောငျးမှနျလှခွငျးကွောငျ့ စိမျ့၏ အသိတရားမြားက လှတျလှတျသှားနသေညျ။
ထိုအခိုကျ သူမ၏လကျနှဈဖကျကသိနျးဇျော၏ဖငျကွီးကို အားရပါးရကွီး ဆှဲဆှဲပွီး ဆောငျ့ပွဈလိုကျ မိသညျ။ သိနျးဇျော အားရှိပါးရှိ ဖိဖိဆောငျ့ခလြိုကျတိုငျးလဲ ဂှေးဥကွီးက စိမျ့၏စအိုဝလေးကို ဖတျကနဲ ဖတျကနဲ လာလာရိုကျခတျနမေိသညျ။ ယငျးသို့ စအိုဝ လေးကို ဂှေးဥကွီးက တဖတျဖတျရိုကျဆောငျ့နခွေငျးမှာလညျးအရသာရှိလှသညျ။ အခကျြလေးငါးဆယျခနျ့ မနားတမျးလိုးဆောငျ့ပေးနရေငျးမှ ပုခုံးပျေါရှိ သူမ၏ခွထေောကျတဖကျကို ပေါငျပျေါသို့ ဆှဲခလြိုကျသညျ။ ထိုကွောငျ့ စောကျပတျက ကနျ့လနျ့အနအေထားသို့ ပွောငျးသှားကာလီးတနျကွီးက စောကျ ပတျထဲသို့ ကနျ့လနျ့ဖွတျဖွတျပွီး ဆောငျ့ဝငျနသေညျ။စောကျပတျထဲသို့ လီးက ဒဲ့ဒိုးကွီး ကနျ့လနျ့ဖွတျဝငျနခွေငျးအတှကျ လီးတနျအထကျနှငျ့အောကျမှာ သနျစှမျးသော စောကျပတျညှဈအားကို ထိထိမိမိ ရရှိသညျ။ ထိုကွောငျ့ စိုစှတျပူနှေးသော စောကျခေါငျးထဲမှ အသားမြှငျလေးမြားက ဒဈကွီးကိုလုံးထှေးစုပျ ယူထားသလို ဖွဈနသေောကွောငျ့ လီးကွီးမှာ တစထကျတစ ပိုမို၍မာကွောတောငျတငျးလာရပသေညျ။ မာကွောလှသော အဖုအထဈ လီးကွီးက အားရပါးရကွီး အဆကျမပွတျလိုးသှငျးလိုကျ ထုတျလိုကျဖွငျ့ လိုးနခွေငျးကွောငျ့ စိမျ့ စောကျပတျကွီးမှာ ပေါကျကှဲလှမတတျ တငျးမာဖေါငျးကွှလာပွီး လီး တနျကွီး ကြှတျထှကျ လှတျထှကျသှားမှာကိုစိုးရိမျသညျ့အလား တငျးတငျးကွီးညှဈထားရငျး စိမျ့ ခါးလေးကို ပငျ့ပငျ့ပွီးကော့ဆောငျ့ပေးလိုကျမိသညျ။ “……..အငျ့……အငျ…….အား…..အငျး……အငျ့…”စိမျ့ နှုတျဖြားမှ မခြိမဆနျ့လေး ညီးတှားရငျး သိနျးဇျော၏ ခါးကိုတဈခါ ကြောကိုတလှညျ့မခြိတငျကဲ ဆှဲဆှဲဆောငျ့ကာ ကော့ထိုးပဈလိုကျမိသညျ။ သိနျးဇျော၏ လီးတနျကွီးမှာ တငျးကနဲ တငျးကနဲ အစှမျးကုနျမာတောငျသှားပွီးအဆုံးထိထိုးဖိကာ သုတျရညျမြားကို စိမျ့၏စောကျခေါငျးကဉျြးကဉျြးလေးထဲသို့ တပွှတျပွှတျ ပနျးသှငျးလိုကျတော့သညျ။ သညျအခိုကျ စိမျ့ခမြာ မတရားအလုပျခံနရေတာကို မပြေ့ောကျသှားသညျ။အကွောအပွိုငျးပွိုငျး ဖုထဈလြှကျ မာ တောငျနသေော လီးတနျကွီးအရသာနောကျသို့တထပျတညျးလိုကျပါရငျး ဖငျကွီးကို ဘယျညာယိမျးနှဲ့ ခါရမျးပေးနမေိတော့သညျ။
လီးတနျကွီးက စောကျ ခေါငျးထဲသို့ တဆုံးထိုးစိုကျကာပူနှေးသောသုတျရမြေားက ပူကနဲ ပူကနဲ ပနျးဝငျလာသညျနှငျ့ စိမျ့တကိုယျလုံးသှကျသှကျခါလောကျအောငျ တ ဆတျဆတျတုနျသှားရလသေညျ။ လီးထိပျက စောကျခေါငျးအတှငျး သားအိမျခေါငျးကို ထိုးစိုကျတပွေီ့းမှသုတျရညျမြား ပနျးထဲ့လိုကျသညျနှငျ့ စိမျ့၏စောကျ ရသေုတျရညျတို့ကလညျး ရှီးကနဲဒလကွမျး ပနျးထှကျကုနျလတေော့သညျ။ “……အား……ရှုး အငျး…..အငျး…..အား….အ….အ…”ခပျတိုးတိုး ကွိတျအျော လိုကျသော စိမျ့၏အသံလေးက အရသာကွီးစှာဖွငျ့ကကြေနြေပျနပျကွီး အျောမွညျသံမှနျး သိသာလှသညျ။ အရညျမြား ရှဲအိုငျပွညျ့လြှံ၍နသေျောလညျး လီး ကွီးကို စောကျခေါငျးထဲမှမခြှတျသေးဘဲ ခပျဆတျဆတျလေး ညှောငျ့၍ လိုးပေးနသေညျ။ ထို့အပွငျ စိမျ့၏ဝတျလဈစလဈ ကိုယျလုံးလေးမှ နို့လေးနှဈလုံးကို ပယျပယျနယျနယျကွီး ဆှဲကိုငျဖွဈညဈလိုကျခွငျးကွောငျ့ စောကျပတျနှဈခွမျးမှာ တငျးကနဲ တငျးကနဲ ညှဈလိုကျမိသညျ။ ဒါကွောငျ့ အရသာ တှသှေ့ားသော လီးကွီးက တငျးကနဲ တငျးကနဲ ဖွဈဖွဈသှားကာပွီးသှား၍ အတနျငယျပြော့နရောမှ တဖွေးဖွေးခငျြး ပွနျ၍ မာတငျးလာသညျ။ စိမျ့စိမျ့သူ အပျေါ သိနျး ဇျော၏ကာမမီးက တောကျလောငျနဆေဲဖွဈသညျ။ လီးကိုစောကျပတျထဲမှ မခြှတျခငျြလောကျအောငျ လိုးခငျြနသေညျ။ ထို့ကွောငျ့ သူ့ပုခုံး ထကျတှငျ တငျလြှကျတခြောငျးတညျးကနျြနသေော သူမ၏ခွထေောကျတဖကျကိုမ၍ သူ့ရှမှေ့ကြျောကာ ဆှဲလှဲ၍ စိမျ့ကို အရုပျလေးတဈရုပျလိုမှောကျခြ လိုကျသညျ။“….အ….အငျး…အီး…..ကြှတ….ကြှတ….”ျလီးကွီးက အပေါကျကဉျြးကဉျြးလေးထဲတှငျ တပတျလညျ၍သှားသညျ။
မှောကျလကျြသားဖွဈ သှားသော စိမျ့စိမျ့သူ၏ခါးလေးကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ဆှဲပွီးမတငျလိုကျသောအခါ စိမျ့စိမျ့သူသညျ ဖငျဗူးတောငျးထောငျထားသော အနအေထားသို့ပွောငျး သှားသညျ။ စိမျ့က ပါးပွငျသို့ စိုစှတျ၍ ကလြာသော မကျြရညျမြားကို လကျဖမိုးလေးတဖကျဖွငျ့ သုတျပဈလိုကျသညျ။ ခပျနီးနီး ထောကျထားသော ပေါငျနှဈ ဖကျကို သိနျးဇျောက ဖွဲကားရနျပွငျလိုကျစဉျ စိမျ့က အစှမျးကုနျပွဲအောငျ ဖွဲကားပေးလိုကျသညျ။ “…….စိမျ့……ကိုယျ့ကို…..စိတျဆိုးနတေုနျးပဲ လား….ဟငျ…”စိမျ့ ဆီမှ ဘာသံမှ မကွား။တိတျနသေညျ။သိနျးဇျော ထပျ၍မေးသညျ။“…..ကိုယျ မေးနတေယျလေ….စိမျ့……ကိုယျ့ကို မုနျးတုနျးပဲလားလို့…… ရှငျ စကားမမြားနဲ့…..ရှငျလုပျခငျြတိုငျး လုပျနပွေီးတော့…”သိနျးဇျော ပွုံးလိုကျမိသညျ။စိမျ့ ရငျထဲက သူ့ကိုမခဈြသညျ့တိုငျ စိမျ့၏လှပသောကိုယျ လေးက သူ့ကိုခဈြနပွေီဆိုတာကိုတော့ သူအတတျသိလိုကျသညျ။ လီးအဖြားလောကျဝငျနသေော စောကျပတျထဲသို့ လကျညှိုးကို ထပျပွီးထိုးထဲ့ကာ ကလိ လိုကျသညျ။ “……အို…..အ…..လား…လား…..ဟငျး…”ခပျနိမျ့နိမျ့ဖွဈနသေော ဖငျဖှေးဥဥကွီးက ယောငျယမျးပွီး ဆတျကနဲ ထောငျသှားသညျ။ထိုအခါ ဖငျ က ထောငျသှားသဖွငျ့ စောကျပတျကွီးက အနောကျသိွု့ပူးကာဖေါငျးတငျးထှကျလာသညျ။ အားရစရာကွီးဖွဈနသေော စောကျပတျကွီးထဲသို့ လီးကွီးကို စိုကျ၍လိုးခလြိုကျလသေညျ။စိမျ့မှာ ပါးစပျလေးဟသှားပွီး မကျြတောငျလေးမြားစငျးကသြှားသညျ။ဖငျကွီးတဈခုလုံးလညျး ဆတျဆတျတုနျကာ ကွကျသီး ဖုလေးတှသေိသိသာသာထသှားသညျ။ “…….စိမျ့…..ခံလို့ ကောငျးလား……ဟငျ….”“……သိဘူး….”စိမျ့ နှုတျခမျးကို ပွတျလုမတတျ ကိုကျထားသညျ။“…… ဗွဈ….ဗွဈ…ဒုတျ….ဒုတျ….”“……အား……အား…..အား….”ဆောငျ့တိုကျလိုကျရငျး လကျကိုအောကျသို့လြို၍ နို့နှဈလုံးကို ဆှဲကိုငျကာနို့သီးခေါငျးလေးတှေ ကို လကျညှိုးလကျမတို့ဖွငျ့ ဖိညှပျပဈလိုကျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ စောကျခေါငျးထဲ တငျးတငျးကွီးစိုကျဝငျနသေော လီးကွီးကိုစောကျပတျနှဈခွမျးက ဆှဲညှဈ လိုကျရငျး ဖငျကွီးကိုနောကျသို့တှနျးဆောငျ့ပဈလိုကျမိသညျ။“…….ဗွဈ….စှတျ…စှတျ……အငျ့…..အငျး…..အငျး….”“…..စိမျ့…..ကောငျးလားဟငျ…..”“…… ကြှတ……ကောငျးပါတယျ……ဆို…”ျဟုဆိုလိုကျသော စိမျ့၏ အမှတျတမဲ့ ထှကျသှားသောလသေံလေးက သိနျးဇျော၏ရငျကိုဆှဲလှုပျလိုကျပါတော့လေ သညျ…………………………………..
“လန်းတယ်နော် အကိုကြီး…..” ကျော်မျိုးဟန်စကားကြောင့် သိန်းဇော် လှမ်းကြည့်မိသည်။ နုနုငယ်ငယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက် အသက်က ၂၀ ကျော်ပုံ မရ။အသားလေးတွေက ရွှေရောင်ဝင်းနေသည်။ဝတ်ထားသောထဘီစကပ်က သူမ၏ကိုယ်အားတင်းကြပ်စွာ စည်းနှောင်ထားသဖြင့် ဖွံ့ထွားသော တင်သား အစုံက အလုံးလိုက်ကားအယ်ပေါ်လွင်နေသည်။အောက်ပိုင်းနှင့် ညီမျှသော ခန္ဒာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကလည်းဖွံ့ထွားမှုမှာ အောက်ပိုင်းနှင့်ညီမျှရုံမျှမက လည် ဟိုက်အင်္ကျီကြောင့် အိ၍တင်းနေသောအသားဝင်းဝင်းလေးများကို ရိုးတိုးရိတ်တိတ်လှမ်းမြင်လိုက်ရသေးသည်။ တမင်ဖြောင့်ထားပုံရသော အချောင်း လိုက်ကျနေသည့် ဆံပင်လေးတွေကကျောဖက်လက်ပြင်တဝိုက်တွင် ဝဲနေသည်။ ပေါ်လွင်သော နှာတံလေး၏ထိပ်က ခပ်ချွန်ချွန်လေးနှင့် နှုတ်ခမ်းလုံးလုံး လေးများက မျက်ဆံကြီးကြီးဖြင့် ကော့ညွတ်ထူထဲသော မျက်တောင်ကြီးများ ဝန်းရံကာစွဲမက်စရာ ကောင်းလှသည်။ ကောင်မလေးက သူတို့ထိုင်နေရာဖက် သို့ တချက်လှည့်၍ မျက်လုံးလေးဝှေ့ကာပြုံးယောင်လေး တချက်သန်းပေးသွားသည်။ သူတို့ထိုင်နေတာက ၉၂ လမ်းထိပ် ဆဲဗင်းအလဲဗင်း ၇၁၁ လက်ဘက် ရည်ဆိုင်လမ်းမဘက် အစွန်ဆုံး စားပွဲတွင်ဖြစ်သည်။ “အကိုကြီး နဲ့ သိလား…”“…အင်း……သိတယ်…”“….ပြောပြပါအုံး…..အကိုကြီးရ….သူ့ အကြောင်း တွေ ကျနော် စိတ်ဝင်စားလို့ပါ”“မင်းတို့ လူငယ်တွေ တော်တော်ခက်တာဘဲ လှတာလေးမြင်ရင် သဘောကျကြတာဘဲ” အသက်က ၄၀ နီးပါးသာရှိ သော်လည်း သူ့အသက်ထက် အများကြီးရင့်သောအဖိုးကြီးလေသံနှင့် သိန်းဇော်က ပြောလိုက်သည်။ “ဟာ…..အကိုကြီး…ကလဲ ဒါကတော့ဗျာ…..”သိန်း ဇော်က ကောင်မလေးသွားရာလမ်းဖက်ကို ကျော်ပြီးကြည့်လိုက်သည်
။ကောင်မလေးကိုတော့ မတွေ့ရတော့။ကြိတ်ကြိတ်တိုး သွားလာနေသောလူတွေကြားမှာ ပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်သည်။ “…ပြောပါအုံး…..အကိုကြီး ရ….”ကျော်ဟန်မျိုး ဖင်နေရာပြင်ထိုင်ရင်း မျှော်လင့်တကြီးမေးသည်။“…ဘာကိုလဲ….”“စောစောက ကောင်မလေး အကြောင်းကိုပေါ့…..”သိန်းဇော် ပြောမ ပြချင်ကြောင်း အကဲခတ်မိပေမဲ့လည်း သိချင်စိတ်ကပြင်းထန်နေလေတော့ အားမနာနိုင်။ကျော်ဟန်မျိုး အတင်းမေးမိသည်။ သိန်းဇော် စိတ်ပျက်သော မျက်နှာပေးဖြင့် ခေါင်းကိုခါယမ်းရင်း ဗူးထဲမှ စီးကရက်တစ်လိပ်ကို ထုတ်၍နှုတ်ခမ်းတွင်တေ့ကာ မီးညှိလိုက်သည်။ “ဈေးကိုင်လိုက်တာ….ဒါကြောင့် လူပျိုကြီးဖြစ်နေတာ…”ကျော်ဟန်မျိုး စိတ်မရှည်နိုင်သည့်အဆုံး သူ့ကို အပြစ်ဆိုသည်။“ဟ ကောင်ရ…..ငါမယူချင်လို့ပါကွ….မင်းဘာသိလဲ…..လူပျိုကြီး ဖြစ်ရတာအကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်ကွ….သိပ်ပြီး ထုံအလွန်းရင်လည်း လူပျိုကြီးဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ချက်က သိပ်ပြီးလည်ရင်လည်း လူပျိုကြီးဖြစ် တတ်တယ်ကွ….” စကားအဆုံးတော့ သိန်းဇော်က ကျော်ဟန်မျိုး မျက်နှာကို တစ်ချက် အကဲခတ်လိုက်သည်။စောစောကလို တက်ကြွရွှင်လန်းတာမျိုးမရှိ တော့ဘဲ အလိုမကျသောမျက်နှာပေးနှင့် သုန်မှုန်၍နေသည်။
“ ကဲ……ပါ……..မင်းသိပ်ပြီးသိချင်နေရင် ငါပြောပြပါ့မယ်….သူ့နာမည်က စိမ့် တဲ့…နေတာက ၈၉ လမ်းထဲမှာ….ငါသိတာက အဲလောက်ဘဲ….”“အင်း…..ဒီ လောက်သိရလဲ…..မဆိုးပါဘူး…”“သူ့နာမည်က အဲဒီ…စိမ့်…..ဆိုတာ တလုံးထဲဘဲလား….”“မဟုတ်ဘူး…….နာမည်အပြည့်အစုံက စိမ့်စိမ့်သ…..”ူ“၈၉ လမ်းထဲမှာဆိုတော့ မမအိ သူ့ကိုသိရင်သိမှာ ကျန်တာတွေ မမအိကိုဘဲဆက်မေးတော့မယ်…”“ဟေ့ကောင်……မင်း ….အိအိ…ကိုမေးရင်မေး ဒါပေမဲ့ ငါပြော တာ မပြည့်စုံလို့ဆိုတာမျိုးတော့ ထည့်မပြောနဲ့”“ဘာကိုပြောတာလဲ….ကျွန်တော် သဘောမပေါက်ဘူး…. “မင်းမေးချင်မေး……ငါ့နာမည်…..မပါစေနဲ့လို့ ပြောတာကွ…ရှင်းလား…”“ဟဲ…ဟဲ…” ကျော်ဟန်မျိုး ဘာအဓိပ္ပါယ်ပေါက်သွားသည်မသိ။သူ့ကို တချက်ကြည့်ကာပြုံးယောင်သန်းသွားပြီး တဟဲဟဲ ရီ သည်။“ကဲ…သွားမယ်ကွာ……အလုပ်ရှိသေးတယ်….”ပြောပြီး ငွေရှင်းကာ နှစ်ယောက်စလုံး လမ်းခွဲ၍ပြန်ခဲ့ကြသည်။ကျော်ဟန်မျိုးက လမ်း ၉၀ ထဲတွင် နေသည်။သိန်းဇော်က ၉၂ လမ်းထဲတွင် နေသည်။သူတို့နှစ်ယောက် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွင် မကြာခဏဆုံတတ်ပြီး တစ်ရပ်ကွက်ထဲနေသူများဖြစ်သည့် အလျောက် ရင်းနှီးနေခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ကျော်ဟန်မျိုးအသက်က အခုမှ ၂၀ ကျော်ရုံသာရှိသေးသည်။သိန်းဇော်အနေနှင့် ကြည့်လျှင်တော့မနူးမနပ် လေးပေါ့။ဒါမျိုးလေးတွေက ပြောရဆိုရခက်တာ သိပြီးသား….ဒါပေမဲ့သိန်းဇော်က ဒါမျိုးတွေ ရိုးနေပြီဟု တွေးရင်း ပြုံးလိုက်မိသည်။
ဒီနေ့ ရုံးပိတ်ရက်လည်းဖြစ် အိနှင့်မတွေ့ရတာလဲ ကြာပြီဖြစ်၍ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်သို့ ပင် မဝင်တော့ဘဲ သိန်းဇော် ၈၉ လမ်းဘက်ထွက်လာမိသည်။ ထိုင်နေကျ ၇၁၁ဆိုင်ရှေ့ရောက်တော့ လှည့်ကြည့်မိသည်။ကျော်ဟန်မျိုးကို မတွေ့ရ။ဒီကောင် လေးပျောက်နေတာ သုံးလေးရက်ရှိပြီ။ ၈၉ လမ်းရောက်တော့ အိနေတာက ဒုတိယထပ်တွင်။လှေခါးကို တက်မည်အလုပ်လှေခါးဘေး မြေညီထပ်အခန်းက ဖွင့်ထားလေတော့ သူလှည့်ကြည့်မိသည်။“ဦး…….မမအိဆီသွား မလို့လား….” တံခါးဝသို့ထွက်၍ပြောလိုက်သော စိမ့်စိမ့်သူအား သိန်းဇော်အားမနာ တမ်းကြည့်မိသည်။“အေး…..ဟုတ်တယ်…..”ကောင်မလေး ပြုံးလိုက် သည်။ညာဖက်ပါးတစ်ဖက်ထဲတွင် ရှိသော ပါးချိုင့်လေးကချစ်စရာကောင်းလှသည်။ “မမအိ…..စောစောကတင်ထွက်သွားတယ်…သူတို့ဘဏ်မှာ အလုပ်များနေလို့ ဒီနေ့အိုဗာတိုင်ဆင်းရမယ်လို့ပြောတယ်…….လာဝင်….ထိုင်အုံး လေ….ဦး…”သိန်းဇော် ဖိနပ်ချွတ်ကာ တိုက်ခန်းထဲ ဝင်လိုက်သည်။“ခဏ ထိုင်အုံးနော်…..ဦး….”ကောင်မလေး နောက်ဖေးဘက်ပြေးဝင်သွားသည်။အိမ်နေ ရင်း ဝတ်ထားသောထဘီလေးအောက်တွင် တင်းရင်းစွင့်ကားနေသော တင်ပါးနှစ်ဆုံက သိန်းဇော်ကိုညှိ့ငင်သွားသည်။ သိန်းဇော်ကုလားထိုင်တစ်လုံးတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ဗိုက်ထဲကနဲနဲဆာလာသည်။ ခါတိုင်းအိဆီရောက် လျှင် အိက အသုတ်ထွက်ဝယ်ပြီး နှစ်ယောက်သားအတူစားနေကြ။ဒီနေ့တော့ အိက အိုဗာတိုင်ဆင်းရသည်။ပြန်မှဘဲ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ဝင်တော့မည်ဟု တွေးလိုက်မိသည်။
သိန်းဇော် ကောင်မလေးဝင်သွားရာ အိမ်နောက်ဖက်သို့ တချက်ငဲ့ကြည့်မိ၏။ကောင်မလေးကို မတွေ့ရပေ။ဒီလိုဘဲ သိန်းဇော် အိ ထံလာခိုက် စိမ့်စိမ့်သူတို့ အခန်းသို့မကြာခဏဝင်၍ လည်မိတတ်သည်။ရင်းနှီးနေခဲ့တာကြာပြီ ဖြစ်သည်။“ဦး…..ဒီမှာ ကော်ဖီ သောက်အုံး….” စိမ့်စိမ့်သူအနားရောက်လာပြီး ကော်ဖီ ပန်းကန်နှင့် လှီးထားသော ကိတ်မုန့်များထည့်ထားသည့် ပန်းကန်တစ်ချပ်ကို ချပေးသည်။ ကောင်မလေးက သူ့ရှေ့မှ ကုလားထိုင်တွင်ဝင်၍ ထိုင်သည်။အိမ် နေရင်းဝတ်ထားသော ခရမ်းရောင်ပြောင် ထဘီလေးနှင့်ဖြူဖွေးသော အသားရောင်လေးကိုနောက်ခံပြုကာ စိမ့်စိမ့်သူလှချင်တိုင်း လှနေသည်။ သိန်းဇော်တ ချက်ပြုံးလိုက်ပြီး ကော်ဖီကို တငုံငုံ၍ ကိတ်မုန့်တချပ်ကိုလှမ်းယူလိုက်သည်။ “ဦး……ကိုမေးမလို့….”“မေးလေ……”“ဦး…နဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ တွေ့ တွေ့နေရတဲ့ တယောက်က ဘယ်ကလဲဟင်…”သိန်းဇော် မျက်ခုံးတစ်ချက် မြင့်တက်သွားပြီး“လမ်း ၉၀ ထဲမှာ နေတယ်……သူ့နာမည်က ကျော်ဟန်မျိုးတဲ့… အလုပ်လက်မဲ့ ၁၀တန်းကျပေါ့….”စကားဆုံးတော့ ကော်ဖီတငုံထပ်၍ သောက်လိုက်သည်။“ဘာဖြစ်လို့လဲ……စိမ့်….”“ဟို….ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး…..ကြုံလို့ မေးကြည့်တာပါ….”“စိမ့် တစ်ယောက်ထဲလား…..အမကြီးရော…..”“အန်တီက ၁၂၄ လမ်းဘက်သွားတယ်….”စိမ့်စိမ့်သူတို့ တူဝရီးနှစ်ယောက်ထဲနေသည်ကို သိပြီးသား။ “ကဲ…..စားလို့သောက်လို့လဲ ပြီးပြီ……ကျေးဇူးဘဲနော်…..ပြန်လိုက်အုံးမယ်…ညီမ”“ဟုတ်ကဲ့ပါ…..”သူထွက်လာတော့ ကောင်မလေး တံခါး ထပိတ်သည်။အပြန်လမ်းတစ်လျှောက်အိ၏အလှနှင့် စိမ့်၏အလှကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး တွေးမိနေသည်။အိ၏အလှကရင့်ကျက်တည်ငြိမ်သောအလှ။ရင်ထဲအေး သည်။ စိမ့်၏အလှက ရင်ထဲ ဘလောင်ဆူပြီးလာရလောက်အောင် ပူသောအလှ စိမ့်နှင့်တွေ့ပြီးတိုင်း သူ့အာရုံထဲမှာ အိကအလိုအလျောက် ပျောက်ကွယ် သွားတတ်နေကြပြီဖြစ်သည်။ ဒီရက်ထဲမှာ အလုပ်တွေကျနေ၍ သိန်းဇော်မအားရ။မဂဇင်းမျက်နှာဖုံးလုံးချင်း မျက်နှာဖုံး ပန်းချီတွေက အတော်လေးကျနေ သည်။
အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေသော်လည်း စိတ်ကမပါချင်။စိမ့်စိမ့်သူက ကျော်ဟန်မျိုးအကြောင်းကိုမေးလိုက်သည့် ကိစ္စက သူ့အာရုံကို နှောက်ယှက် နေသည်မဟုတ်ပါလား။ “ဒေါက်……ဒေါက်…….ဒေါက်…..”တံခါးခေါက်သံကြောင့် သိန်းဇော်မထချင်ထချင်ဖြင့် တံခါးထဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ “…..ဟင်…..စိမ့်…..ပါလား….ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ…”“…..ဟုတ်တယ်……ဦး….”“…….လာ……အထဲဝင်ထိုင်လေ…….”သိန်းဇော် တိုက်ခန်းတံခါးပြန်ပိတ်ခိုက် စိမ့်စိမ့်သူ အခန်းထဲကို ကြည့်မိသည်။စားပွဲပေါ်တွင် ရွိုင်ရယ်ဝီစကီပုလင်းက ထောင်လျှက်သား။ဘေးတွင်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်နှင့် အသားကင်ပန်းကန်တစ်ချပ် ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ စိမ့်စိမ့်သူနှုတ်ခမ်းတွန့်လိုက်သည်။“……ထိုင်လေ…..စိမ့်…..”“……ဟုတ်ကဲ့ပါ…..”နှစ်ယောက်စလုံးပြိုင်တူထိုင်မိသည်။ဖန်ခွက်ထဲမှ လက်နှစ်လုံးလောက်ကျန်သောဝီစကီကိုကောက်မော့လိုက်ပြီး အသားကင်တစ်ဖက်ကို ကောက်ဝါးလိုက်သည်။စိမ့်စိမ့်သူက သူ့ကို မျက်နှာလေးတည်တည် ဖြင့် ကြည့်နေသည်။“….ကဲ…မလာစဖူး……အလာထူး…….ဆိုစမ်းပါအုံး…”“…….အော်…..ဟုတ်ကဲ့……..ဦးကို မေးစရာလေးရှိလို့….”စိမ့်စိမ့်သူ၏ လေသံက အရင်ကနဲ့မတူဘဲ မာဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေသည်ကို ခေါင်းထဲမှာရီဝေနေသည့်ကြားက သိန်းဇော် သတိထားလိုက်မိသည်။ “……မေးပါဗျာ….”“…….ဦးက ကျမကို ဘာဖြစ်လို့ ပူစီလေးလို့….ပြောရတာလဲ…….”“……ဟင်…”စိမ့်စိမ့်သူ တဲ့ကြီးပြောလိုက်တာက သိန်းဇော်၏ရင်ထဲကို ဒိန်းကနဲ လာမှန်သည်။သူအံ သြသော အမူအယာနှင့် မျက်လုံးကြီးပြူးပြီး စိမ့်စိမ့်သူကို ကြည့်နေမိသည်။“…..ဦး……ကျော်ဟန်မျိုးကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက် ပြောလိုက်တာလေ….ဒီ ကောင်မလေးက ပူစီလေးပါကွာဆိုတာလေ…ငြင်းချင်သေးလို့လား….”သိန်းဇော် ပူလာသော လည်ချောင်းတွေကို စားပွဲပေါ်ရှိ မတ်ခွက်ထဲမှရေတကျိုက် သောက်၍ ဂလု ဆိုပြီး အတင်းမော့ချလိုက်သည် “…….ဟုတ်တယ်…….ကို ပြောမိတယ်….”“…..ကျမတို့နဲ့ ဦး….သိတာခင်တာကြာပြီဘဲ….ဘာဖြစ်လို့ အဲလို ပြောရတာလဲကျမကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆိုတာ……ဦး လဲသိသားနဲ့….”သိန်းဇော် အရက်ကို လက်နှစ်လုံးလောက် ဖန်ခွက်ထဲငှဲ့လိုက်ပြီးရေလက်နှစ်လုံး လောက် ထပ်ရောကာ တဘရိတ်ထဲမော့ချလိုက်သည်။ ပြီးတော့အသားကင်တဖတ်ကို ကောက်ဝါးပြီး စိမ့်စိမ့်သူကို ရီဝေစွာ ကြည့်လိုက်သည်။
“ …..ပြောပါအုံး…..ဘာဖြစ်လို့ အဲလို ပြောရတာလဲ…”“ကို……..မဖြေချင်ဘူး…….”“…..မပြောလို့မရဘူး…..ကျမသိပ်သိချင်တယ်…..ရှင့်စကားက ကျမကို အရမ်းနစ်နာသွားတာ…….ကဲ…ပြောပါအုံး….”“….ကဲ……မင်းသိချင်နေလဲ ပြောရတာပေါ…….”ဒီမျှနှင့်စကားရပ်သွားပြီး သိန်းဇော်က ခါးဆန့်၍ ပြင်ထိုင် လိုက်သည်။“……ပြောလေ……ကျမနားထောင်နေတယ်….”နီရဲ၍ ခက်ထန်နေသော သူမ၏မျက်နှာဆီမှ အကြည့်ကို ခွာလိုက်သည်။“…….ချစ်မိလို့ပေါ့…… စိမ့်ရယ်…”တိုးတိုးလေး တစ်လုံးချင်းပြောလိုက်သော သိန်းဇော်၏အသံက စိမ့်စိမ့်သူနားထဲမှာဟိန်းထွက်၍ ပူဆင်းသွားသည်။“…….ဘာ…… ဘယ်လို……..ဦး….”“…….မင်းကို…..ကိုယ်….” “….တော်ပြီ…ဆက်မပြောနဲ့ ဖအေနဲ့….သမီးလောက်ရှိတဲ့ ဟာကိုများ….”“…ဟား…..ဟား…ဟား….”သိန်း ဇော် ခွက်ထိုးခွက်လန် ရီလိုက်တော့ ကောင်မလေး ကြောင်သွားသည်။ဒီလူကြီး ရေချိန်ကိုက်နေပြီလား…..။ရေချိန်ကိုက်ရုံမျှမက ကျော်နေပြီ…..။ဝိုင်းသိမ်း တောမည့်ဆဲဆဲ သူမရောက်လာပြီး သူ့ပြစ်ချက်ကို ထိုးဆွလိုက်သည့်အတွက်သိန်းဇော် ထပ်ဆင့်၍ သောက်လိုက်မိသည်။ သူ့ကို ကြောင်ကြည့်နေသော မျက်လုံးကို မျက်လွှာချလိုက်ပြီးဆို့နစ်ကြေကွဲသောပုံစံဖြင့် နဖူးပေါ်ဝဲကျနေသော ဆံပင်လေးများကိုသပ်တင်လိုက်သည်။“……ရှင်…….မရှက်ဘူး လား….”“……ဘာကိုလဲ……စိမ့်…”“…..ရှင့်…..အရွယ်ကြီးနဲ့…..”“……ဟား…ဟား….ဟား…”သိန်းဇော် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရီလိုက်ပြန်သည်။အရက်နံ့က လွင့်ပျံ၍နေသည်။
“……..မင်း…….ကိုယ့်ကို…..မုန်းသွားပြီလား…..စိမ့်…”ရှေ့သို့ တိုး၍ မျက်နှာချင်းထိလုမတတ် ပြောလိုက်သောစကား။စိမ့်စိမ့်သူ ဘာစကားမှ ပြန်မပြော ဖြစ်။အသားလေးတွေ တုန်နေသည်။ ဘာမပြော ညာမပြောနှင့် သိန်းဇော်က သူမ၏ပုခုံးသားတင်းတင်းကျစ်ကျစ်လေးကိုဆွဲယူကာ ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက် သည်။“……..ဟင်…….အို…..”“……ရှင်……ရှင်……..ဒါ…ဒါ…..ဘာလုပ်တာလဲ……”စိမ့်စိမ့်သူ ဖြတ်လတ်စွာ သိန်းဇော်၏ လက်များကို ရိုကထုတ်လိုက် သည်။်လက်လွတ်သွားပေမဲ့ သိန်းဇော်မျက်နှာက ဖြတ်ကနဲ ရှေ့သို့တိုးပြီး နမ်းလိုက်သည်။ချက်ခြင်း မျက်နှာလွှဲလိုက်သဖြင့် ပါးကို မနမ်းမိသော်လည်း န ထင်စပ်ကိုနမ်းလိုက်မိသည်။ မျက်နှာလေးတစ်ဝိုက် သွေးများ ရှိန်းကနဲ ခံစားလိုက်ရသည်။ “……ရှင်……လူယုတ်မာ…..”ချက်ခြင်းဒေါသသွေးတို့က ဆူဝေ လာသည်။ပြောလဲပြော နောက်သို့လည်းတလှမ်းဆုတ်လိုက်သော စိမ့်စိမ့်သူအား သိန်းဇော်အားဖြင့် လက်တဖက်ကို လှမ်း၍ဆွဲလိုက်သည်။ သူ့ဖက်သို့ ငိုက်၍ပါလာသော စိမ့်စိမ့်သူက စားပွဲပေါ်ရှိရွိုင်ရယ်ဝီစကီပုလင်းကို လှမ်း၍ဆွဲလိုက်ပြီး တပါတည်း သိန်းဇော်၏ခေါင်းကိုရိုက်ချလိုက်သည်။ သိန်းဇော် ခေါင်းကိုဖျတ်ကနဲ ငုံ့ပေးလိုက်ပြီး အားလွန်သွားသော စိမ့်စိမ့်သူ၏လက်မှ တတောင်ဆစ်ကို သူ့လက်ဖနောင့်နှင့် တွန်းပေးလိုက်သည်။ အားနှင့်ရိုက်သော ရိုက်ချက်က အားလွန်ကာ အရှိန်နှင့်ယိုင်သွားစဉ် ထပ်မအတွန်းခံလိုက်ရသောကြောင့် သိန်းဇော်၏ရင်ခွင်ထဲသို့ ကျောလေးမှီပြီး လဲကျသွားသည်။ “…….ခွ မ်း…..ချ……လွမ်း…..”လက်ထဲမှ အရက်ပုလင်းက စားပွဲစွန်းနှင့်တိုက်မိသွားပြီး ကွဲအသွား စိမ့်စိမ့်သူက လက်မှလွှတ်ချလိုက်သည်။
“…..လွှတ်….လွှတ်….လွှတ်စမ့်းပါ…..ခွေးကြီး…..”“ဟင်…….နင်……နင်…..ငါ့ကို…..” သိန်းဇော်၏လှိုင်းထနေသော ရာဂစိတ်ထဲသို့ ဒေါသစိတ်က ရောပြွန်း သွားသည်။ သူ့ရင်ခွင်ထဲသို့ ကျောမှီကျလာသော စိမ့်စိမ့်သူ၏လည်ဂုတ်လေးကို ရှေ့သို့ ဖိ၍တွန်းကာ စားပွဲပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်သည်။“……ဒုန်း…… အမလေး….”နဖူးနှင့်စားပွဲ မိတ်ဆက်သွားသဖြင့် ခေါင်းထဲ မိုက်ကနဲဖြစ်သွားပြီး မှိတ်လိုက်ရသောမျက်လုံးနှစ်လုံးကို ချက်ခြင်းပြန်၍ဖွင့်လိုက်သည်။ “…တိ ရိစ္ဆာန်ကြီး…..မယုတ်မာနဲ့…လွှတ်….ဖယ်…ဖယ်….စမ်း…”“….ဟား…ဟား…ဟား….လွှတ်မယ်…လွှတ်မယ်….စိတ်ချ….ငါ့ရဲ့သွေးသားတွေကို မင်းရဲ့ကိုယ်ထဲ ကို လွှတ်ပေးမယ်…..စိတ်သာချ…”“…….ရှင်…..ရှင်……နော်…”စိမ့်စိမ့်သူနှုတ်မှ ဤမျှသာ ထွက်လာနိုင်ပြီး မေးကြောလေးများ ထောင်အောင်အံကြိတ် လိုက်ကာ မျက်ရည်တွေ တပေါက်ပေါက် ကျလာသည်။ အရက်ရေချိန်လွန်နေသော သိန်းဇော် ရာဂစိတ်နှင့်ဒေါသစိတ်တို့ စွတ်ဖက်လာသောအခါ စိတ်ထဲမှ အတားအဆီးမရှိတော့။လူရောစိတ်ပါ လွတ်နေသည်။ သိန်းဇော်က စိမ့်စိမ့်သူ ခါးကို ဒူနှင့်ဖိထောက်ထားရင်း စားပွဲပေါ်တွင်မှောက်ရက်ဖြစ်နေသော စိမ့်စိမ့် သူ၏ ဂျိုင်းအောက်မှ လက်ကိုလျှိုနှိုက်ကာလုံးကျစ်အိစက်နေသော နို့လေးနှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ညှစ်လိုက်လေသည်။“….အ….အ….ခွေးကြီး….မ….မလုပ် နဲ့…..”ကြောက်အားလန့်အားကြားက တကိုယ်လုံးကြက်သီးတဖျန်းဖျန်းထသွားသည်။ကိုယ်လုံးလေး တွန့်ကနဲ လူးသွားသည်။ စိမ့်စိမ့်သူ အားယူကာ ကုန်း ထရန် ဒူးကိုအကွေးကြမ်းပြင်တွင် လေးဘက်ထောက်ရက်သားဖြစ်သွားသည်။
သိန်းဇော်က စိမ့်စိမ့်သူ၏နသယ်စပ်လေးကို မမှီမကမ်းငုံ့နမ်းလိုက်ရာ စိမ့်စိမ့် သူက ခေါင်းကိုကြမ်းတမ်းစွာ ခါထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ မျက်နှာလေးကို နမ်း၍ မမှီသောအခါ နုညက်ဝင်းမွတ်သောဂုတ်သားတစ်တစ်လေးကို လှမ်းကိုက်၍ မလွတ်တမ်း ခဲထားလိုက်သည်။ “….ဟင်…..အင်း….အင်း….ဟင်း….ဟင်း…”စိမ့်စိမ့်သူ အနာခံပြီး ရုန်းသည်။သိန်းဇော်ကလည်း မလွှတ်သည့်အပြင်သူ့ လက်နှစ်ဖက်က လုံးတစ်အိစက်သော နို့လေးနှစ်လုံးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီးကိုင်ညှစ်ဆုပ်နယ်ပေးလိုက်ရာ စိမ့်စိမ့်သူ တကိုယ်လုံး ထိုးထိုးထွန့်ထွန့် ဖြစ် သွားသည်။ သည်အချိန်နှင့် တပြိုင်နက်တည်းတွင် မာကျောသော အချောင်းကြီးကစိမ့်စိမ့်သူ၏ ဖင်ကြားသို့ ပုဆိုးနှင့်ထဘီခံနေသည့်ကြားက တွန်း၍ဝင်လာ သည်။“……………လွှတ်…….ခွေးကြီး…..”စူးရှအက်ကွဲသော စိမ့်စိမ့်သူ၏အော်သံက တိုက်ခန်းတစ်ခုလုံး လွှမ်းခြုံသွားသည်။အော်လည်းအော် ဖင်ကိုလည်း ရမ်းလိုက်သောကြောင့် ဖင်ကြားမှ အသားနုလေးများ၏ အတွေ့ကို ထိတွေ့နေသော လီးက ဘေးသို့ ချော်ထွက်သွားသည်။ သိန်းဇော် ဒေါသအိုးပေါက်က သွားသည်။ွဲ“…..ဒုန်း….အင့်……အင်း….”ရက်စက်လွန်းသည်ဟု ပြောရမည်ပင်။စိမ့်စိမ့်သူ၏ နောက်စေ့ကို လက်နှင့်အုပ်ပြီးမျက်နှာကို စားပွဲနှင့်ကိုင်ဆောင့် လိုက်သောကြောင့် စိမ့်စိမ့်သူ မေ့မျောလုနီးပါးခံစားလိုက်ရသည်။နားထဲမှ လေတွေထွက်သွားကာ မျက်ခုံးစွန်းမှ သွေးပူပူများစီးကျလာသည်ကို ခံစားသိ လိုက်ရသသည်။ သိန်းဇော် အချိန်ဆွဲနေလျှင် အန္တရာယ်များမည်ကို တွေးလိုက်မိလို့လား။ဒါမှမဟုတ် သွေးသားတွေက တားမရအောင် ဆူပွက်လာလို့လား မသိ။
သူ့ပုဆိုးကိုဆတ်ကနဲ ချွတ်ချလိုက်သလို စိမ့်စိမ့်သူ၏ထဘီကိုလဲ ဆောင့်၍ ဆွဲချွတ်ချလိုက်သည်။ ဝင်းဝါအိစက်သော စိမ့်စိမ့်သူဖင်ကြီးက သိန်း ဇော်၏ကာမရမ္ပက်ဇော် ကိုဟုန်းကနဲတောက်လောင်စေပြီး ပြင်းပြသော ဒေါသတို့ ရောထွေးပေါင်းစပ်ကာကြမ်းတမ်းသန်မာလွန်းနေသည်။ ခေါင်းတစ်ခုလုံး အုံခဲပြီး မျက်ရည်စက်လက်နှင့် မှုံမှိုင်းခံစားနေရသည့်ကြားမှပင် အဝတ်မဲ့သော ဖင်ကြားတင်းတင်းကြီးနှစ်ခြမ်းကြားသို့ နွေးပူသော လီးတန်ကြီး အထိအတွေ့ကို ခံစားနေရကြောင်း အသိစိတ်က သိနေသည်။ စားပွဲပေါ် ဆန့်တင်ထားသော လက်နှစ်ဖက်ကွေးထောက်ခွင့်မရလောက်အောင် သိန်းဇော်မှ ယောက်ျားအားကြီးဖြင့် ဖိထားသည်။ သိန်းဇော်၏ လီးတန်ကြီးက ထွားကြိုင်းတုတ်ခိုင်စွာ သန်မာလျက်သံချောင်းကြီးတချောင်းပမာ ဖင်ကြားသို့ တစွပ်စွပ် တိုးဝင်နေသည်။ တမင်ညှောင့်နေသောကြောင့် ပြစ်ကနဲ ပြစ်ကနဲ အသံလေးများဖြင့် ဖင်သား နှစ်ခြမ်းကြားသို့ လီးထိပ်ကြီး တိုးဝင်သွားတိုင်း မြည်နေသည်။ စိမ့်စိမ့်သူ သတိရသော်လည်း မျက်လုံးကဖြင့် မဖွင့်နိုင်။တကိုယ်လုံးလည်း လှုပ်မရဘဲအားအင်များနှုံးချည့်နဲ့သွားသလို ခံစားနေရသည်။နောက်ဆုံးရှိသော အင်အားများကိုစုစည်း၍ ဖင်ကြီးကို အထက်သို့ကော့တင်ပြီး ကော့ထိုးလိုက်ကာ သိန်းဇော်၏ကိုယ်ကြီးကို ခါထုတ်ပစ်ရန် ကြိုးစားလိုက်သည်။
“…..ကဲ…..ဟာ…..အင်း…..”“…..ဟာ…..ငြိမ်ငြိမ်နေ….စမ်း….ကဲ…ဟာ….”“……ဒုန်း….အ….အား….ကျွတ…ကျွတ….ကျွတ….”်သိန်းဇော် လူစိတ် ပျောက်နေပြီ။ဒုတိယအကြိမ် စိမ့်စိမ့်သူ နောက်စိအား ညာလက်ဝါးဖြင့်အုပ်ကိုင်ကာ မျက်နှာကို စားပွဲဖြင့် ဖိဆောင့်ပစ်လိုက်ပြန်သည်။ စိမ့်စိမ့်သူ နှာခေါင်း ထဲ မွှန်ထူသွားသည်။အရာရာသည် ခေတ္တမျှ အမှောင်ဖုံးသွားတော့သည်။ ဘယ်လောက်ကြာသွားသည်မသိ။ စိမ့်စိမ့်သူ သတိရလာတော့မွေ့ယာပေါ်ရောက် နေသည်။သူမ၏ခြေနှစ်ချောင်း မိုးပေါ်သို့ထောင်နေသည်။ခြေဖဝါးတို့က ခေါင်ရင်းဖက်သို့ လန်နေသည်။တကိုယ်လုံးတွင် ဘာအဝတ်အစားမှ မရှိတော့ပေ။ လက်တဝါးစာမျှ ဖေါင်းတင်းမောက်ကြွနေသော ဆီးခုံကြီးအထက်မှ နီကျင်ကျင်စောက်မွှေးလေးများကိုပင် စိမ့်စိမ့်သူ ပြန်မြင်နေရသည်။ စိမ့်စိမ့် သူ၏လက် နှစ်ဖက်က ဘေးသို့ အတောင်ပံပမာ ပျံ့ကျ၍နေသည်။ခေါင်းမှဆံနွယ်တို့က မျက်နှာတစ်ခြမ်းကို အုပ်၍နေသည်။စောက်ပတ်ထဲမှ ပူကနဲ ခံစား ချက်နှင့်အတူ ကိုယ်လုံးလေးက ဆတ်ကနဲဖြစ်ကာ ခါးက ကုန်းကနဲ ထလိုက်သည်။ဗြကနဲ……ဗြစ်ကနဲ…ကြပ်ကြပ်တောက်တောက်တိုးတိုးဝင်လာသော လီး သံကိုလည်း ကြားလိုက်ရသည်။ လေးလံသော မျက်ခွံအစုံကို အသာဟ၍ မှေးစင်းပြီး ကြည့်လိုက်မိသည်။သိန်းဇော်က လက်နှစ်ဖက်ကို သူမ၏ကိုယ်ဘေး တစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီသို့ ခွပြီးထောက်ထားသည်။စိမ့်စိမ့်သူ၏ဒကောက်ခွက်နှစ်ဖက်ကို သူ့ပုခုံးပေါ်တွင်ထမ်းထားသည်။ သိန်းဇော်၏လီးတန် တုတ်တုတ်ခဲခဲ ကြီးက စိမ့်စိမ့်သူ၏ ပြစ်ချွဲနေသောစောက်ပတ်ထဲသို့ စိုက်စိုက်နစ်ဝင်သွားသည်ကို ငုံ့က်ြည့်ရင်း သိန်းဇော်က လိုးနေသည်။ စိမ့်စိမ့်သူ သတိလစ်သွားသည် ကို အခွင့်ကောင်းယူကာ အဝတ်အစားတွေအားလုံးကို ချွတ်ပစ်ခဲ့သည်။ဖေါင်းကားမို့မောင်နေသော စောက်ပတ်လေးဝင်းဝင်းပပနှင့် ကြေးနီရောင်စောက် မွှေးလေးများ ခြံရံလျှက် လှပစွာ နီရဲရွှမ်းစိုခုံးထနေသည်။ သူက ကြမ်းတမ်းစွာ မဆောင့်။
ခပ်ဖြေးဖြေးလေးဖိချလိုက် မျှင်းမျှင်းလေးဆွဲနှုတ်လိုက် လုပ်ရင်း လီးအဝင်အထွက်ကို အသေအချာငုံ့ကြည့်ရင်းလိုးနေခြင်းဖြစ်သည်။စိမ့်စိမ့်သူက သတိလစ်ဟန်ဆောင်ရင်း လွတ်မြောက်ရန်နည်းလမ်းကို တွေးတောကြံဆ နေမိသည်။ဒါပေမဲ့…….ဒါပေမဲ့ပေါ့…….စောက်ပတ်နဲ့လီး ထိပြီတွေ့ပြီဆိုသည်နှင့် အသွေးအသားတို့က တားမရဆီးမရနိုင်ဖြစ်ကာ မည်သို့မှ ထိန်းချုပ်၍ မရ တော့ပေ။ တဇွတ်ဇွတ် ဖြေးဖြေးချင်း နစ်နစ်သွင်းချလိုက်သော လီးဒစ်ကြီး က စောက်စေ့ငေါက်တောက်လေးကို တိုက်တိုက်ဝင်သွားတိုင်း စိမ့် တကိုယ်လုံး ရှိန်းဖိန်းကျင်တက်သွားသည်။ ထိုအခိုက် စအိုလေးကို ရှုံ့ကနဲ လုပ်လိုက်မိ တာကအစ သူမကိုယ်သူမ သိနေသည်။“….ဗြစ်….ဇွတ်…..ဇွိ…စွပ်…..ဗြ စ်…..ဘွတ်….”စိမ့် ဖင်ကြီးက မသိမသာ ဘယ်ညာယိမ်းနွဲ့ကာ ခါယမ်းလာ တတ်သည်။ဖင်ကြီးက အပေါ်ဖက်သို့လည်း ဇတ်ကနဲ ဇတ်ကနဲ တွန့်တွန့်တက်သွား တတ်သည်။ ထိုသို့ တက်သွားတိုင်း သိန်းဇော်က ငုံ့ကြည့်ရင်း သူ့လီးကြီး ကို တည့်မတ်စွာ စိုက်ချဝိုကချပြစ်လိုက်သည်။“…..ဘွတ်……ပလွတ်…..ဗြစ်…..ဗြ စ်……”“…..အင်း…..အင်း….အင့်….ဟင်း….ဟင်း….ဟင်း…”စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားထူထူနှစ်ခြမ်းက ခပ်အာအာလေးပြဲပြဲသွားအောင်ပင်လီးတန်ကြီးက အရှိန်နှင့်အဆက်မပြတ် စိုက်စိုက်ဝင်သွားနေသည်။သိန်းဇော် ပါးစပ်မှ ဖားဖိုကြီးလို အသက်ရှုသံတွေ မြန်လာပြီး အားရပါးရကိုဆောင့်လိုးနေပေသည်။ ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း လီးတန်ကြီးနှင့် စောက်ပတ်နှစ်ခမ်းသားလေးများက လိပ်လိပ်ပြီး ကပ်ပါလာတတ်သည်။ ဒါကိုပင် သိန်းဇော်သဘောအကျကြီး ကျ ကာ ဆက်တိုက်မနားတမ်း ဆောင့်လိုးနေသည်။ စအိုဖက်မှ အရေပြား လေးများက လီးတန်ကြီးစိုက်စိုက်ဝင်သွားတိုင်း ရှုံ့ရှုံသွားပြီးတင်းကနဲ တင်းကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားသည်။ ဖြူချွဲပြစ်ခဲသော စောက်ရည်များက စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းပတ်လည်တွင်ပြူတစ်ပြူတစ်နှင့်ဖြစ်ကာ အမြုပ်လေးများထနေသည်။ လီးတန်ကြီး၏ အရသာက ထူးခြားလွန်ကဲစွာ ကောင်းမွန်လှခြင်းကြောင့် စိမ့်၏ အသိတရားများက လွတ်လွတ်သွားနေသည်။
ထိုအခိုက် သူမ၏လက်နှစ်ဖက်ကသိန်းဇော်၏ဖင်ကြီးကို အားရပါးရကြီး ဆွဲဆွဲပြီး ဆောင့်ပြစ်လိုက် မိသည်။ သိန်းဇော် အားရှိပါးရှိ ဖိဖိဆောင့်ချလိုက်တိုင်းလဲ ဂွေးဥကြီးက စိမ့်၏စအိုဝလေးကို ဖတ်ကနဲ ဖတ်ကနဲ လာလာရိုက်ခတ်နေမိသည်။ ယင်းသို့ စအိုဝ လေးကို ဂွေးဥကြီးက တဖတ်ဖတ်ရိုက်ဆောင့်နေခြင်းမှာလည်းအရသာရှိလှသည်။ အချက်လေးငါးဆယ်ခန့် မနားတမ်းလိုးဆောင့်ပေးနေရင်းမှ ပုခုံးပေါ်ရှိ သူမ၏ခြေထောက်တဖက်ကို ပေါင်ပေါ်သို့ ဆွဲချလိုက်သည်။ ထိုကြောင့် စောက်ပတ်က ကန့်လန့်အနေအထားသို့ ပြောင်းသွားကာလီးတန်ကြီးက စောက် ပတ်ထဲသို့ ကန့်လန့်ဖြတ်ဖြတ်ပြီး ဆောင့်ဝင်နေသည်။စောက်ပတ်ထဲသို့ လီးက ဒဲ့ဒိုးကြီး ကန့်လန့်ဖြတ်ဝင်နေခြင်းအတွက် လီးတန်အထက်နှင့်အောက်မှာ သန်စွမ်းသော စောက်ပတ်ညှစ်အားကို ထိထိမိမိ ရရှိသည်။ ထိုကြောင့် စိုစွတ်ပူနွေးသော စောက်ခေါင်းထဲမှ အသားမျှင်လေးများက ဒစ်ကြီးကိုလုံးထွေးစုပ် ယူထားသလို ဖြစ်နေသောကြောင့် လီးကြီးမှာ တစထက်တစ ပိုမို၍မာကြောတောင်တင်းလာရပေသည်။ မာကြောလှသော အဖုအထစ် လီးကြီးက အားရပါးရကြီး အဆက်မပြတ်လိုးသွင်းလိုက် ထုတ်လိုက်ဖြင့် လိုးနေခြင်းကြောင့် စိမ့် စောက်ပတ်ကြီးမှာ ပေါက်ကွဲလှမတတ် တင်းမာဖေါင်းကြွလာပြီး လီး တန်ကြီး ကျွတ်ထွက် လွတ်ထွက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်သည့်အလား တင်းတင်းကြီးညှစ်ထားရင်း စိမ့် ခါးလေးကို ပင့်ပင့်ပြီးကော့ဆောင့်ပေးလိုက်မိသည်။ “……..အင့်……အင်…….အား…..အင်း……အင့်…”စိမ့် နှုတ်ဖျားမှ မချိမဆန့်လေး ညီးတွားရင်း သိန်းဇော်၏ ခါးကိုတစ်ခါ ကျောကိုတလှည့်မချိတင်ကဲ ဆွဲဆွဲဆောင့်ကာ ကော့ထိုးပစ်လိုက်မိသည်။ သိန်းဇော်၏ လီးတန်ကြီးမှာ တင်းကနဲ တင်းကနဲ အစွမ်းကုန်မာတောင်သွားပြီးအဆုံးထိထိုးဖိကာ သုတ်ရည်များကို စိမ့်၏စောက်ခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲသို့ တပြွတ်ပြွတ် ပန်းသွင်းလိုက်တော့သည်။ သည်အခိုက် စိမ့်ခမျာ မတရားအလုပ်ခံနေရတာကို မေ့ပျောက်သွားသည်။အကြောအပြိုင်းပြိုင်း ဖုထစ်လျှက် မာ တောင်နေသော လီးတန်ကြီးအရသာနောက်သို့တထပ်တည်းလိုက်ပါရင်း ဖင်ကြီးကို ဘယ်ညာယိမ်းနွဲ့ ခါရမ်းပေးနေမိတော့သည်။
လီးတန်ကြီးက စောက် ခေါင်းထဲသို့ တဆုံးထိုးစိုက်ကာပူနွေးသောသုတ်ရေများက ပူကနဲ ပူကနဲ ပန်းဝင်လာသည်နှင့် စိမ့်တကိုယ်လုံးသွက်သွက်ခါလောက်အောင် တ ဆတ်ဆတ်တုန်သွားရလေသည်။ လီးထိပ်က စောက်ခေါင်းအတွင်း သားအိမ်ခေါင်းကို ထိုးစိုက်တေ့ပြီးမှသုတ်ရည်များ ပန်းထဲ့လိုက်သည်နှင့် စိမ့်၏စောက် ရေသုတ်ရည်တို့ကလည်း ရှီးကနဲဒလကြမ်း ပန်းထွက်ကုန်လေတော့သည်။ “……အား……ရှုး အင်း…..အင်း…..အား….အ….အ…”ခပ်တိုးတိုး ကြိတ်အော် လိုက်သော စိမ့်၏အသံလေးက အရသာကြီးစွာဖြင့်ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး အော်မြည်သံမှန်း သိသာလှသည်။ အရည်များ ရွှဲအိုင်ပြည့်လျှံ၍နေသော်လည်း လီး ကြီးကို စောက်ခေါင်းထဲမှမချွတ်သေးဘဲ ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ညှောင့်၍ လိုးပေးနေသည်။ ထို့အပြင် စိမ့်၏ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးလေးမှ နို့လေးနှစ်လုံးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီး ဆွဲကိုင်ဖြစ်ညစ်လိုက်ခြင်းကြောင့် စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းမှာ တင်းကနဲ တင်းကနဲ ညှစ်လိုက်မိသည်။ ဒါကြောင့် အရသာ တွေ့သွားသော လီးကြီးက တင်းကနဲ တင်းကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားကာပြီးသွား၍ အတန်ငယ်ပျော့နေရာမှ တဖြေးဖြေးချင်း ပြန်၍ မာတင်းလာသည်။ စိမ့်စိမ့်သူ အပေါ် သိန်း ဇော်၏ကာမမီးက တောက်လောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ လီးကိုစောက်ပတ်ထဲမှ မချွတ်ချင်လောက်အောင် လိုးချင်နေသည်။ ထို့ကြောင့် သူ့ပုခုံး ထက်တွင် တင်လျှက်တချောင်းတည်းကျန်နေသော သူမ၏ခြေထောက်တဖက်ကိုမ၍ သူ့ရှေ့မှကျော်ကာ ဆွဲလှဲ၍ စိမ့်ကို အရုပ်လေးတစ်ရုပ်လိုမှောက်ချ လိုက်သည်။“….အ….အင်း…အီး…..ကျွတ….ကျွတ….”်လီးကြီးက အပေါက်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲတွင် တပတ်လည်၍သွားသည်။
မှောက်လျက်သားဖြစ် သွားသော စိမ့်စိမ့်သူ၏ခါးလေးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆွဲပြီးမတင်လိုက်သောအခါ စိမ့်စိမ့်သူသည် ဖင်ဗူးတောင်းထောင်ထားသော အနေအထားသို့ပြောင်း သွားသည်။ စိမ့်က ပါးပြင်သို့ စိုစွတ်၍ ကျလာသော မျက်ရည်များကို လက်ဖမိုးလေးတဖက်ဖြင့် သုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ခပ်နီးနီး ထောက်ထားသော ပေါင်နှစ် ဖက်ကို သိန်းဇော်က ဖြဲကားရန်ပြင်လိုက်စဉ် စိမ့်က အစွမ်းကုန်ပြဲအောင် ဖြဲကားပေးလိုက်သည်။ “…….စိမ့်……ကိုယ့်ကို…..စိတ်ဆိုးနေတုန်းပဲ လား….ဟင်…”စိမ့် ဆီမှ ဘာသံမှ မကြား။တိတ်နေသည်။သိန်းဇော် ထပ်၍မေးသည်။“…..ကိုယ် မေးနေတယ်လေ….စိမ့်……ကိုယ့်ကို မုန်းတုန်းပဲလားလို့…… ရှင် စကားမများနဲ့…..ရှင်လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်နေပြီးတော့…”သိန်းဇော် ပြုံးလိုက်မိသည်။စိမ့် ရင်ထဲက သူ့ကိုမချစ်သည့်တိုင် စိမ့်၏လှပသောကိုယ် လေးက သူ့ကိုချစ်နေပြီဆိုတာကိုတော့ သူအတတ်သိလိုက်သည်။ လီးအဖျားလောက်ဝင်နေသော စောက်ပတ်ထဲသို့ လက်ညှိုးကို ထပ်ပြီးထိုးထဲ့ကာ ကလိ လိုက်သည်။ “……အို…..အ…..လား…လား…..ဟင်း…”ခပ်နိမ့်နိမ့်ဖြစ်နေသော ဖင်ဖွေးဥဥကြီးက ယောင်ယမ်းပြီး ဆတ်ကနဲ ထောင်သွားသည်။ထိုအခါ ဖင် က ထောင်သွားသဖြင့် စောက်ပတ်ကြီးက အနောက်သိြု့ပူးကာဖေါင်းတင်းထွက်လာသည်။ အားရစရာကြီးဖြစ်နေသော စောက်ပတ်ကြီးထဲသို့ လီးကြီးကို စိုက်၍လိုးချလိုက်လေသည်။စိမ့်မှာ ပါးစပ်လေးဟသွားပြီး မျက်တောင်လေးများစင်းကျသွားသည်။ဖင်ကြီးတစ်ခုလုံးလည်း ဆတ်ဆတ်တုန်ကာ ကြက်သီး ဖုလေးတွေသိသိသာသာထသွားသည်။ “…….စိမ့်…..ခံလို့ ကောင်းလား……ဟင်….”“……သိဘူး….”စိမ့် နှုတ်ခမ်းကို ပြတ်လုမတတ် ကိုက်ထားသည်။“…… ဗြစ်….ဗြစ်…ဒုတ်….ဒုတ်….”“……အား……အား…..အား….”ဆောင့်တိုက်လိုက်ရင်း လက်ကိုအောက်သို့လျို၍ နို့နှစ်လုံးကို ဆွဲကိုင်ကာနို့သီးခေါင်းလေးတွေ ကို လက်ညှိုးလက်မတို့ဖြင့် ဖိညှပ်ပစ်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် စောက်ခေါင်းထဲ တင်းတင်းကြီးစိုက်ဝင်နေသော လီးကြီးကိုစောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းက ဆွဲညှစ် လိုက်ရင်း ဖင်ကြီးကိုနောက်သို့တွန်းဆောင့်ပစ်လိုက်မိသည်။“…….ဗြစ်….စွတ်…စွတ်……အင့်…..အင်း…..အင်း….”“…..စိမ့်…..ကောင်းလားဟင်…..”“…… ကျွတ……ကောင်းပါတယ်……ဆို…”်ဟုဆိုလိုက်သော စိမ့်၏ အမှတ်တမဲ့ ထွက်သွားသောလေသံလေးက သိန်းဇော်၏ရင်ကိုဆွဲလှုပ်လိုက်ပါတော့လေ သည်…………………………………..
Categorized as အငျးဆကျ Tagged စိမျ့